Orexin Receptors: ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ကုထုံးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Annu ဗြာ Pharmacol Toxicol ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2012 ဖေဖော်ဝါရီ 10 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Annu ဗြာ Pharmacol Toxicol ။ 2011 ဖေဖော်ဝါရီ 10; 51: 243-266 ။
သောမတ်စ်အီး Scammell1 နှင့် ခရစ္စတိုဖာဂျေ Winrow2
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Annu ဗြာ Pharmacol Toxicol
(စ hypocretin-1 နှင့် -2 အဖြစ်လူသိများ) Orexin-A နှင့် -B အဆိုပါ OX1 နှင့် OX2 receptors မှတဆင့် arousal အများအပြားရှုထောင့်မြှင့်တင်ရန်သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ထုတ်လုပ် neuropeptides ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ orexin ထုတ်လုပ်အာရုံခံဆုံးရှုံးလူသားများနှင့်ကြွက်များတွင် narcolepsy ဖြစ်ပေါ်စေသည်အဖြစ်တကယ်တော့သူတို့က, သာမန်နိုးနိုးကွားကွားများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်အိပ်မပျော်၏ကုသမှုများအတွက်ဝတ္ထုကုထုံးအဖြစ်အသေးစား-မော်လီကျူး orexin အဲဒီ receptor ရန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအကျိုးစီးပွားထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ Orexin ရန်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အိပ်စက်ခြင်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်လက်တွေ့ရလဒ်တွေကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုနေကြသည်, OX2 သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး OX1 နှင့် OX2 receptors ပိတ်ဆို့ကြောင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အား: အများအပြားဒြပ်ပေါင်းများကိုအဆင့် III ကိုစမ်းသပ်မှုတွေ၌ရှိကြ၏။ အဆိုပါ orexin system ကိုအဓိကအား arousal အားပေးအားမြှောက်ထားသကဲ့သို့ဤအသစ်သောဒြပ်ပေါင်းများဖွယ်ရှိလက်ရှိဆေးဝါးများနှင့်အတူကြုံတွေ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအများအပြားပေးရခြင်းမရှိဘဲအိပ်မပျော်တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
keywords: hypocretin, အိပ်မပျော်, ညှို့, သက်သာစေသောဆေး, narcolepsy, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု
1998 ခုနှစ်တွင်အသစ်အချက်ပြ molecules တွေရှာဖွေနေအုပ်စုနှစ်စုလွတ်လပ်စွာ orexin neuropeptides နှင့်၎င်းတို့၏ receptors ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Sakurai, Yanagisawa နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (1သူတို့မူလကနို့တိုက်ကျွေးမှုမြှင့်တင်ရန်ထင်ခဲ့ကြသောကြောင့်,) (ဟူသောဝေါဟာရကို orexin မှလာသောဤ peptides orexin-A နှင့် -B အမည်ရှိ orexisအစာစားချင်စိတ်အဘို့, ဂရိစကားလုံး) ။ က de Lecea နှင့် Sutcliffe ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် (2) သူတို့က hypothalamus အတွက်ထုတ်လုပ်နေကြပြီးအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် peptides hypocretin-1 နှင့် -2 အမည်ရှိနှင့် peptides ၏ incretin မိသားစုတချို့တူညီရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းက orexin peptides နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်ပေါ်သာကျိုးနွံသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပေမယ့်, arousal နှင့်အိပ်စက်ခြင်းအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုလေးနက်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ တကယ်တော့, narcolepsy, အိပ်၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများတဦးသည် orexin ထုတ်လုပ်အာရုံခံတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်, ဤအိပ်ပျော်ခြင်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်အိပ်မပျော်ကုသမှုအတွက်တစ်ဝတ္ထုချဉ်းကပ်မှုအဖြစ် orexin ရန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အကျိုးစီးပွားလောင်စာသိရသည်။
အားလုံးနီးပါးဆေးခန်းများတွင်အသုံးပြုညှို့အချက်ပြγ-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ် monoamine အချက်ပြပြောင်းလဲပေမယ့်ဒီ neurotransmitters ထိုကဲ့သို့သော unsteady သွားနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများအဖြစ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်မြောက်မြားစွာဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ, အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဆနျ့ကငျြ, orexin ရန်နည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူအိပ်စက်မှုမြှင့်တင်ရန်မျှော်မှန်းထားသည်နှင့်မကြာသေးမီ, ကြီးမားတဲ့လက်တွေ့လေ့လာမှုများအလားအလာကြည့်ရှုနေကြသည်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့ orexin အချက်ပြ, orexin ရန်နှင့်အတူမကြာသေးမီက preclinical နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများနှင့်အိပ်မပျော်နှင့်အခြားရောဂါကုသမှုအဘို့ဤအပေါင်းများအလားအလာ applications များ၏ neurobiology ပြန်လည်သုံးသပ်။
OREXIN signal ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Orexin-A နှင့် -B (prepro-orexin ၏ cleavage မှဆင်းသက်လာကြသည်1, 2) ။ Orexin-တစ်ဦးကနှစ်ခု disulfide တံတားများနှင့် orexin-B ကအတူ 33 အမိုင်နိုအက်ဆစ်များပါဝင်သည်ဖြစ်ကောင်းနှစ်ခု alpha helices (ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် 28 အမိုင်နိုအက်ဆစ်တစ်ခု linear peptide ဖြစ်ပါသည်3) ။ တစ်ခုချင်းစီကို peptide ဟာကို C terminus မှာ amidated သည်, orexin-တစ်ဦး၏ N ကို terminus ကိုလည်း pyroglutamyl ကျန်ကြွင်းနှင့်အတူ cyclized ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ peptides (သိပ်သည်း core ကိုတွေ့နေကျမဟုတ်သောအတွက်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်အများဆုံးဖွယ်ရှိ Synaptic ဖြန့်ချိနေကြပါတယ်2) ။ Little ကအဆိုပါ orexins ၏ kinetics အကြောင်းကိုလူသိများပေမယ့် orexin-တစ်ဦးကကြာကြာ-တည်တံ့အပြုအမူသက်ရောက်မှုသွေးဆောင်ဟန်, ဖြစ်ကောင်းကြောင့် post ကို-translation ပြုပြင်မွမ်းမံ (များ၏ဖြစ်ပါတယ်1, 4) ။ အဆိုပါ orexin peptides မြင့်မား (orexin-B ကအတွက်လူသားများနှင့်ကြွက်, တူညီ orexin-တစ်ဦးကပာနှငျ့ရုံနှစျခုအမိုင်နိုအက်ဆစ်အစားထိုးအကြားထိန်းသိမ်းထားကြသည်1) ။ zebrafish အပါအဝင်အတော်များများသည်အခြားကျောရိုးရှိလည်း orexins ထုတ်လုပ်ပေမယ့်ကျောရိုး orexin ကဲ့သို့ peptides ကင်းမဲ့ပုံရသည်။
အဆိုပါ orexin peptides အဆိုပါ fornix encircles နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အနှံ့ကိုတိုးချဲ့သော hypothalamus အတွက်အာရုံခံတဲ့စပျစ်သီးပြွတ်ကထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ လူ့ဦးနှောက် (50,000-80,000 orexin ထုတ်လုပ်အာရုံခံပါရှိသည်5, 6), နှင့်ဤဆဲလ် (များစွာကိုဦးနှောက်ဒေသများမှကျယ်ပြန့်စီမံချက်များရှိ7) ။ အပြင်းထန်ဆုံးစီမံကိန်း၏တချို့က tuberomammillary နျူကလိယ (TMN) ၏ histaminergic အာရုံခံခြင်း, raphe အရေးပါ၏ serotonergic အာရုံခံ, နှင့် ventral tegmental ၏ dopaminergic အာရုံခံခြင်း, locus coeruleus ၏ noradrenergic အာရုံခံအပါအဝင် arousal နှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိကြောင်းအရေးပါဖို့ရှိပါတယ် ဧရိယာ (VTA) (ပုံ 1) ။ အဆိုပါ orexin အာရုံခံလည်းတိုက်ရိုက် cortex ဖို့ Basal forebrain နှင့်စီမံကိန်းအတွက် cholinergic နှင့် noncholinergic အာရုံခံ innervate ။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေကတဆင့်, အ orexin system ကိုကောင်းစွာ arousal အမျိုးမျိုးရှုထောင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အများအပြားအာရုံကြောစနစ်များ၏ activation ကိုသြဒိနိတ်မှနေရာယူထားသည်။
အဆိုပါ orexin system ကို arousal တုံ့ပြန်မှုသို့လှုံ့ဆျောအချက်ပြမှုများကိုပေါင်းစပ်ကူညီပေးသည်။ ဒါကသိထားအိပ်စက်ခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်ပြလိုက်ခြင်းရာမှတဆင့် putative လမ်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု arousal အမျိုးမျိုးရှုထောင့်မှမောင်းထုတ်ရန် orexin အာရုံခံသက်ဝင်စေပါ။ ...
အဆိုပါ orexin အာရုံခံကိုလည်းကောင်းစွာ (အာရုံကြောအချက်ပြအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်ရန်တည်ရှိပြီးနေကြတယ်8, 9) ။ သူတို့ကထိုကဲ့သို့သော amygdala နှင့်နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသေံမှအဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောနျူကလိယ accumbens နှင့် VTA အဖြစ်ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိကြောင်းအရေးပါထံမှတုံ့ပြန်မှုဖျန်ဖြေကြောင့်ဦးနှောက်ဒေသများထံမှခိုင်မာတဲ့သွင်းအားစုလက်ခံရရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian rhythms မနိုး၏အချိန်ကိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက် (အ hypothalamus (ဇလဌာန) ၏ dorsomedial နျူကလိယမှတဆင့် orexin အာရုံခံသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ10) ။ ဤအမတူကွဲပြားသွင်းအားစုအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်, အ orexin အာရုံခံသင့်လျော်စွာအခြေအနေများအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီး arousal မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သေးသရုပ်ပြမဟုတ်ပေမယ့်အိပ်မပျော်နှင့်အတူလူမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောတိုးလာဇီဝဖြစ်စဉ်မှုနှုန်းနှင့်စာနာသေံအဖြစ် hyperarousal လက္ခဏာပြနေသောကြောင့်, ညဥ့်အချိန်၌ orexin အာရုံခံ၏မသင့်လျော် activation (အိပ်မပျော်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ11, 12).
အဆိုပါ orexin peptides ((စ HCRTR1 နှင့် HCRTR2 အဖြစ်လူသိများ OX1R နှင့် OX2R,) ကို OX1 နှင့် OX2 receptors မှရွေးချယ်ခညျြနှောငျ1) ။ ဤရွေ့ကား 7-transmembrane domains များနှင့်အခြား neuropeptide receptors အချို့တူညီရှိသည်, G ပရိုတိန်း-coupled receptors ဖြစ်ကြသည်။ OX1R နှင့် OX2R ပြင်းပြင်းထန်ထန် (လူသားများနှင့်ကြွက်အကြားအမိုင်နိုအက်ဆစ်ပာအတွက် 94% ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အတူနို့တိုက်သတ္တဝါများကိုဖြတ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားကြသည်1).
OX1R IC (မြင့်သောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူ orexin-တစ်ဦးချည်နှောင်50 တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင် binding assay အတွက် 20 nm), ဒါပေမယ့် orexin-B က (IC ဘို့သိသိသာသာလျော့နည်းဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်50 420 nm) (ပုံ 2) ။ orexin-တစ်ဦးအဘို့ဤ selection OX1R (EC နှင့်အတူ transfected cho ဆဲလ်တွေထဲမှာကယ်လ်စီယမ်ယာယီ၏တိုင်းတာခြင်းအတွက် ပို. ပင်သိသာဖြစ်ပါသည်50 orexin-B) မှအဘို့အ 30 nm နှိုင်းယှဉ် orexin-တစ်ဦးအဘို့အ 2,500 nm (1) ။ OX2R ရှယ်ယာ OX64R နှင့်အတူ 1% အမိုင်နိုအက်ဆစ် homology ပေမယ့်မြင့်မားတဲ့ဆှဖှေဲ့နှင့်အတူ orexin-A နှင့် -B နှစ်ဦးစလုံးစညျး, လျော့နည်းရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ် (IC50 အသီးသီး 38 nm နှင့် 36 nm,) (1) ။ သူတို့ကတခြား neuropeptide receptors အချို့တည်ဆောက်ပုံတူညီကြသော်လည်း, OX1R မဟုတ်သလို OX2R မဆိုသိသာ neuropeptide Y ကိုအဘို့အဆှဖှေဲ့, secretin, ဒါမှမဟုတ်အလားတူ peptides (ရှိပါတယ်1, 13).
ယန္တရားများအချက်ပြ Orexin ။ orexin-B ကအချက်ပြမှုများသော်လည်း OX1R နှင့် OX2R နှစ်ဦးစလုံးမှတဆင့် Orexin-တစ်ဦးကအချက်ပြမှုများကိုအဓိက OX2R မှတဆင့်။ , G ပရိုတင်းကကမကထပြုခဲ့ Intracellular ကက်စကိတ် depolarizes သော intracellular ကယ်လစီယမ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆိုဒီယမ် / ကယ်လစီယမ် exchanger ကိုသက်ဝင် ...
OX1R နှင့် OX2R mRNA ကျယ်ပြန့် (orexin အာရုံကြောဆိပ်ကမ်း၏ဆင်တူတဲ့ပုံစံအတွက်ဦးနှောက်ထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်14) ။ ထိုကဲ့သို့သော locus coeruleus အဖြစ်တချို့ကအရေးပါသာ OX1R mRNA ဖော်ပြနှင့်ထိုကဲ့သို့သော TMN အဖြစ်အခြားသူများကိုသာ OX2R mRNA ဖော်ပြ။ အတော်များများကထိုကဲ့သို့သော raphe အရေးပါ, VTA, amygdala နှင့် cortex အဖြစ်ဒေသများနှစ်ဦးစလုံး receptors ထုတ်လုပ်ရန်, ဒါပေမယ့် OX1R နှင့် OX2R အတူတူပင်အာရုံခံဖော်ပြနေကြသည်ရှိမရှိမသိရနေဆဲဖြစ်သည်။ မြေပုံ orexin receptors mRNA ၏ဖြန့်ဖြူးလေ့လာခဲ့ကြအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောလေ့လာမှုများ; လက်ရှိ antisera အများအပြား nonspecific အစွန်းအထင်းထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် orexin အဲဒီ receptor ပရိုတိန်း detect လုပ်ဖို့ immunostaining အသုံးပြု. လေ့လာမှုများကိုသတိထားပြီးကြည့်ရှုအားပေးရပါမည်။
အများစုမှာသုတေသနဦးနှောက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့် orexins နှင့်၎င်းတို့၏ receptors ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏတခြားနေရာထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဝှေးစေ့ prepro-orexin mRNA ၏အလယ်အလတ်ပမာဏဆံ့, ဒါပေမယ့်အဲဒီ receptor စကားရပ် (အနိမ့်ပုံရသည်1, 15) ။ Orexin နှင့် OX2R mRNA adrenal cortex အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြ (15, 16) ။ Orexin ထုတ်လုပ်အာရုံခံလည်း (အစာအိမ်နှင့်အူသိမ်၏ submucosal နှင့် myenteric plexuses တှငျဖျောပွထားပြီ17), ဒါပေမယ့် orexin antisera နှင့်အတူ Cross-ဓာတ်ပြုပြီးတစ်ခု orexin ကဲ့သို့ peptide ကိုကိုယ်စားပြုမည်အကြောင်းကြောင့်ဤအရေးဆိုမှု (အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်18) ။ ဦးနှောက်ပြင်ပရှိ orexin peptide စကားရပ်အနိမ့်ဖြစ်ဟန်အဖြစ်, orexin ရန်သိသိသာသာရံသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ဖွယ်မရှိပေ။
Orexin receptor signal ယန္တရားများ
မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ (orexins အာရုံခံ depolarize နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသနှင့်များစွာသောမိနစ်နှုန်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့ကြ19-22) ။ ယေဘုယျအားဖြင့် OX1R, G ဖို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးမှထင်နေသည်qနှင့် OX2R, G မှတစ်ဆင့်အချက်ပြနိုင်ပါတယ်q သို့မဟုတ်, Gi/Goဒါပေမယ့်နားချင်းဆက်မှီယန္တရားများဆဲလ်အမျိုးအစားအားဖြင့်ကွဲပြားဟန်နှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် (အာရုံခံအတွက်လေ့လာရကြပြီမဟုတ်16, 23).
orexins ၏စူးရှသောဆိုးကျိုးများအများအပြား ionic ယန္တရားများကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ တချို့ကအာရုံခံ GIRK အပါအဝင်ပိုတက်စီယမ်လိုင်းများ, တစ်ဦးတားစီးမှတဆင့်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်လာပေမည် (က G Rectifier အတွင်းပရိုတိန်း-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်) ချန်နယ်များကို (24) ။ ထို့အပြင် orexin receptors မှတစ်ဆင့်အချက်ပြ (ယာယီအဲဒီ receptor အလားအလာလိုင်းများမှတဆင့်ဖြစ်စေ, intracellular စတိုးဆိုင်ကနေဗို့-န့်သတ်ထားထားပြီးကယ်လစီယမ်လိုင်းများမှတဆင့် intracellular ကယ်လစီယမ်အတွက်လျင်မြန်စွာနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တက်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်1, 25-27) ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆိုဒီယမ် / ကယ်လစီယမ်ဖလှယ်မှုများ၏ activation (ပစ်မှတ်အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်28, 29) ။ ဤအ postsynaptic ဆိုးကျိုးများအပြင်, orexins အရှင်မြစ်အောက်ပိုင်းတွင် neuron (အပေါ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်, ဂါဘမြို့သားသို့မဟုတ်အချိုမှု၏လွှတ်ပေးရန်သွေးဆောင်အာရုံကြောဆိပ်ကမ်းအပေါ် presynaptically လုပျဆောငျနိုငျ21, 25) ။ Orexin အချက်ပြလည်းအာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲတိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်ပု VTA ခုနှစ်, orexins များ၏အရေအတွက်ကိုတိုး N-methyl-D-aspartate (NMDA) (နာရီပေါင်းများစွာအဘို့အချိုမှု၏ excitatory သက်ရောက်မှုဖို့အာရုံခံပိုပြီးတုံ့ပြန်မှုအောင်, ဆဲလ်အမြှေးပါးအတွင်း receptors30, 31) ။ ဤအယန္တရားများမှတဆင့်, အ orexins ယေဘုယျအား arousal အများအပြားရှုထောင့်မြှင့်တင်ကြောင်းအာရုံခံ excite မှထင်နေကြသည်။
အဆိုပါ orexin ထုတ်လုပ်အာရုံခံလည်းအချိုမှု, dynorphin နှင့် prepro-dynorphin ကနေဆင်းသက်လာဖြစ်ကောင်းသည်အခြား neuropeptides (ထုတ်လုပ်ရန်32, 33) ။ အများကြီးလျော့နည်းသူတို့ဖြန့်ချိထားသည့်အောက်တွင်ဤ Co-neurotransmitters သို့မဟုတ်အခြေအနေများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဇီဝကမ္မသိသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, orexins TMN အာရုံခံ excite နှင့် dynorphin ၏ coadministration လည်း (များ၏ညှိနှိုင်း TMN အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးမြှင့်, inhibitory postsynaptic အလားအလာပါလျော့ကျစေပါတယ်34) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရုံ orexin peptides ချို့တဲ့ကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, orexin အာရုံခံချို့တဲ့ကြွက်လျင်မြန်စွာမျက်စိလှုပ်ရှားမှု (REM) ၏အဝလွန်ခြင်းနှင့် dysregulation ဆီသို့ပိုမိုအားကောင်းသဘောထားတွေရှိတယ် (အိပ်35, 36) ။ ထို့ကြောင့် orexin ရန် orexins ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိတ်ဆို့စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့် coreleased neurotransmitters နေဆဲဖြစ်စဉ်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
THE OREXIN စနစ်၏ Function
Orexins (arousal နှင့်အိပ်စက်ခြင်းအပေါ်သူတို့ရဲ့အများဆုံးဖြစ်ပွားအပြုအမူသက်ရောက်မှုအချို့ကွိုးစားအားထုပုံ 1) ။ ကြွက်၏ဦးနှောက်ထဲသို့ orexin-တစ်ဦးသို့မဟုတ် -B ၏ injection သိသိသာသာ (တိုက်ရိုက်အဆိုပါ locus coeruleus, TMN အတွက်အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, raphe အရေးပါ, Basal forebrain နှင့် cortex မှတဆင့်ဖြစ်ကောင်း, နာရီပေါင်းများစွာများအတွက်နိုးနိုးကွားကွားတိုးပွါး4, 20, 37-40) ။ အဆိုပါ orexin အာရုံခံမော်တာတွေနဲ့နိုးနိုးကွားကွား-အထူးသဖြင့်နိုးနိုးကွားကွားစဉ်အတွင်းဇီဝကမ္မတက်ကြွနေကြသည်လှုပ်ရှားမှု-ပြီးတော့ Non-REM နှင့်နေ REM sleep (စဉ်အတွင်းတိတ်ဆိတ်စွာလဲကျ41-43) ။ အကျိုးဆက် orexin-တစ်ဦး၏ extracellular အဆင့်ဆင့် (ကြွက်များတွင်တက်ကြွစွာ, နှိုးကာလအတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြပြီးအိပ်နေစဉ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထက်ဝက်ဟာသူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုကျ44) ။ အလားတူပုံစံရှဉ့်မျောက်များတွင်တွေ့မြင်ရ၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုထိုနေ့၏အဆုံးမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်မျောက်ညအချိန်တွင်နိုးကြားထားလျှင် (မြင့်သောရှိနေဆဲ45) ။ ထို့ကြောင့် orexins ဖွယ်ရှိကြွက်နှင့်မျောက်ဝံများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပုံမှန်တက်ကြွကာလအတွင်း arousal မြှင့်တင်ရန်။ လူသားမြားသညျတှငျ, cerebrospinal fluid (CSF) orexin အဆင့်ဆင့်အတွက် diurnal အပြောင်းအလဲ (အများကြီးသေးငယ်ပုံရသည်46, 47), ဒါပေမယ့် CSF ယေဘုယျအားဖြင့်ဝေးလွှတ်ပေးရန်၏အဓိကဆိုဒ်များ မှစ. , lumbar ဒေသကနေစုဆောင်းကြောင့်ဒီဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်နိုးနိုးကွားကွား၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် orexins များ၏လိုအပ်ချက်လူများနှင့် orexin အချက်ပြချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာသိသာသည်။ narcolepsy နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနာတာရှည်မကြာခဏအကြီးအကျယ်အိပ်ရှိသည်, အပြည့်အဝ narcolepsy phenotype ရှိသူများ orexin-တစ်ဦးက (၏ CSF အဆင့်ဆင့်အတွက်သိသိသာသာလျှော့ချရေးအပြင်မှာရှိတဲ့ orexin ထုတ်လုပ်အာရုံခံတစ်အကြမ်းဖျင်း 90% အရှုံးများ5, 33, 48, 49) ။ Orexin peptide နောက်ကောက်ကြွက်လည်း (မိမိတို့အတက်ကြွကာလအတွင်းနိုးနိုးကွားကွား၏ရှည်လျားသောအကြိမ်ကြိမ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ခုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူပြင်းထန်သောအိပ်ရှိသည်ထင်ရ50, 51) ။ စိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီကြွက်နိုးနိုးကွားကွားနီးပါးပုံမှန်စုစုပေါင်းပမာဏရှိသည်, ဒါပေမယ့် (၎င်းတို့၏ပါတီအားအကြိမ်ကြိမ်ပုံမှန်ထက်အများကြီးတိုတောင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့အိပ်ပျော်ခြင်းသို့နိုးနိုးကွားကွားထံမှလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲ52) ။ နှောင့်အယှက် orexin အချက်ပြနဲ့အတူကြွက်နှင့်ခွေးလည်း (အိပ်စက်ခြင်း၏အကျဉ်းကာလအားဖြင့်ကြားဖြတ်နိုးနိုးကွားကွား၏တိုတောင်းသောအကြိမ်ကြိမ်အတူအလားတူအပြုအမူများ53, 54) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက်ဟာ orexin peptides နိုးနိုးကွားကွား၏ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်တည်ငြိမ်များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားသည်။
နာတာရှည်နေ့ခင်းဘက်အိပ်အပြင်, narcolepsy ဖြစ်ကောင်း REM အိပ် dysregulation ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းလက္ခဏာတွေထုတ်လုပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် (REM sleep ကိုပုံမှန်အတိုင်းအိပ်ပျော်ခြင်းကာလအတွင်းသာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော် narcolepsy နှင့်အတူလူများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်, REM sleep ကိုနေ့၏မည်သည့်အချိန်တွင်မဖြစ်ပွားနိုင်သည်ပုံ 3()36, 55, 56) ။ ချွတ် dozing သို့မဟုတ်နိုးထအပေါ်သို့သည့်အခါဤအလက္ခဏာတွေလည်းအိပ်ပျော်ရာဆုံးရှုံးခဲ့ကြသူသာမန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ပေမယ့်အပြင်, narcoleptic တစ်ဦးချင်းစီကိုမကြာခဏတစ်တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးအဘို့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း hypnagogic စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ခြင်းသွက်ချာပါဒရှိသည်။ အများစုမှာသိသိသာသာ, narcolepsy နှင့်အတူလူမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောရယ်မောသို့မဟုတ်တစ်ဟာသကြားနာနှင့်ဆက်နွယ်သောသူတို့အားအမျှတန်ခိုးကြီး, အပြုသဘောစိတ်ခံစားမှုများကဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော cataplexy အဖြစ်လူသိများသွက်ချာပါဒ၏အကျဉ်းဖြစ်စဉ်များရှိသည်။ (အပျော့စားဖြစ်စဉ်များရုံစက္ကန့်အနည်းငယ်တည်တံ့မျက်နှာကိုသို့မဟုတ်လည်ပင်း၏အဖြစ်သိမ်မွေ့အားနည်းချက်ကိုထင်ရှားစွာပြခြင်းငှါ, သို့သော်ပြင်းထန်သောဖြစ်စဉ်များအတွက်တစ်ဦးချင်းကိုမြေပြိုလဲသွားပြီနိုင်ပြီးအထိတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်မိနစ်များအတွက်အပြည့်အဝသတိသော်လည်းရွေ့ဆက်လက်တည်ရှိ57) ။ မျိုးရိုးဗီဇနှောင့်အယှက် orexin အချက်ပြနဲ့အတူကြွက်နှင့်ခွေးလည်း (နိုးနိုးကွားကွား၏အလယ်၌ cataplexy ၏ရုတ်တရက်ဖြစ်စဉ်များရှိ50, 51, 54) ။ narcolepsy နှင့်အတူအားလုံးလူများ၏ခန့်မှန်းခြေတဝက် cataplexy ကင်းမဲ့, သူတို့သည်မကြာခဏလျော့နည်းပြင်းထန် hypnagogic စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းသွက်ချာပါဒရှိသည်။ ဤအလျော့နည်းထိခိုက်နစ်နာတစ်ဦးချင်းစီ၏အများစုမှာ (သူတို့ orexin ထုတ်လုပ်အာရုံခံမှလျော့နည်းကျယ်ပြန့်ဒဏ်ရာရစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, orexin ၏ပုံမှန် CSF အဆင့်ဆင့်ရှိ49, 58) ။ ပိုများသောလက်တွေ့သုတေသန orexin အချက်ပြ၏စူးရှသောပိတ်ဆို့ထားခြင်းဟာ orexin peptides ၏နာတာရှည်အရှုံးထဲကပေါ်ထွန်းသောသူတို့ထံမှကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့် orexin ရန်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း, သွက်ချာပါဒ, ဒါမှမဟုတ် REM sleep ကို dysregulation ၏အခြားနိမိတ်လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
လျင်မြန်သောမျက်စိလှုပ်ရှားမှု (REM) ၏ပျမ်းမျှပမာဏ 24 ဇများအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အိပ်ရာကြွင်းသောအရာအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် narcoleptic ဘာသာရပ်များအတွက်အိပ်။ (အသံသွင်း7နှင့် 8 လေးအကြားစတင်ခဲ့ကြသည်နှင့်ဘာသာရပ်များကြော်ငြာ lib အိပ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်n = အသီးအသီးအုပ်စုထဲမှာ 10) ။ ကိုးကားစရာအနေဖြင့်အဆင်ပြေအောင် ...
ဒီထက် arousal နှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ထားအတွက် OX1R နှင့် OX2R ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ကြွက်တွေမှာ OX1R ၏မျိုးဗီဇကိုပယ်ဖျက် (နိုးနိုးကွားကွားခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းမထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်59), ဒါပေမယ့် OX2R ၏နှောင့်အယှက် cataplexy မပါဘဲအလယ်အလတ်အိပ်ထုတ်လုပ် (60) ။ နှစ်ဦးစလုံး receptors ချို့တဲ့ကြွက် orexin peptide နောက်ကောက်ကြွက်တွင်တွေ့မြင်ကြောင်းအလားတူပြင်းထန်အိပ်ရှိသည်, သူတို့သည်လည်း (အချို့ cataplexy ပြ61) ။ အတူတူစဉ်းစား, ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက် OX2R ပိတ်ဆို့ကြောင်းမူးယစ်ဆေးအိပ်ပျော်ခြင်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်အတန်အသင့်ထိရောက်သောဖြစ်သင့်ကြောင်း, OX1R နှင့် OX2R နှစ်ဦးစလုံးကိုပိတ်ဆို့ကြောင်းမူးယစ်ဆေးအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Orexins နှင့်ခံတွင်း၏ထိန်းချုပ်ရေး, ဆုကြေး, နှင့်အခြားအပြုအမူ
သူတို့နာမဆိုလိုသကဲ့သို့, orexin peptides လည်းအစာစားချင်စိတ်ထိန်းချုပ်မှုတချို့အခန်းကဏ္ဍမှထင်နေကြသည်။ အလငျးကာလအတွင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်အခါတုံ့ပြန်မှုထိုကဲ့သို့သော neuropeptide Y ကို (အဖြစ်ဂန္တဝင်စာစားချင်စိတ်ကို-လှုံ့ဆော် peptides နှင့်အတူမြင်ကြကြောင်းထက်အများကြီးသေးငယ်ပေမယ့်, orexins, ကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှုတိုးမြှင့်1, 62) ။ orexin-တစ်ဦးကကြွက်များပုံမှန်အားဖြင့်အစာစားသည့်အခါမှောင်မိုက်ကာလ၌ပေးသောအခါသို့သော်ကြောင့် (ထိုအလင်းကာလအတွင်းနို့တိုက်ကျွေးရေးအတွက်တိုး arousal တစ်ခုတိုးကနေပျေါပေါကျစခွေငျးငှါအကြံပြုခြင်း, အစားအစာစားသုံးမှုတိုးမြှင့်မထားဘူး63) ။ သို့တိုင်ထို orexin အာရုံခံရှင်းလင်းစွာစာစားချင်စိတ်ကိုအချက်ပြတုံ့ပြန်: အများအပြားလေ့လာမှုများအစာရှောင်ခြင်း၏ 1-2 ရက် orexin အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အကြမ်းအားဖြင့် prepro-orexin mRNA နှစ်ဆကြောင်းပြသကြပါပြီ (1, 64) ။ စိတျအပိုငျးမှာတော့အဲဒီစာစားချင်စိတ်ကိုအချက်ပြသည့် arcuate ကနေအာရုံကြောသွင်းအားစုများနှင့် hypothalamus ၏ ventromedial အရေးပါ (ကကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါ8, 9) ။ ထို့အပြင် orexin အာရုံခံဇီဝဖြစ်စဉ်အချက်ပြမှုများကိုတိုက်ရိုက်ကိုတုံ့ပြန်: သူတို့က ghrelin သို့မဟုတ် (ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများပြ) အနိမ့်ဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် leptin အားဖြင့် inhibited နေကြသည် (လုံလောက်သောစွမ်းအင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုညွှန်ပြချက်) (65-67) ။ 12 ဇထက်ပိုမိုစားစရာဘို့ဆုံးရှုံးအခါ, ကြွက် foraging နေမှုကြောင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဖို့တုန့်ပြန်စေခြင်းငှါအရာ, ပိုပြီးနိုးနိုးကွားကွားနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုရှိသည်။ သို့သော်အစားအစာဆုံးရှုံးသောအခါ, orexin အာရုံခံချို့တဲ့ကြွက် foraging, အ orexin အာရုံခံမှတဆင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုလုပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်ပြ arousal မောင်းထုတ်ရန်ကြောင်းအကြံပြု, ပိုပြီးသေးငယ်တုံ့ပြန်မှုကိုပြသနှင့်အခြားသပ္ပါယ်အပြုအမူတွေ (66).
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတုံ့ပြန်နှိုးဆွသောအဓိကနှင့်အလားအလာအကြိုးလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတွက် orexin စနစ်၏တစ်အများကြီးကျယ်ပြန့်အခန်းကဏ္ဍ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ Dopaminergic နျူကလီးယပ် accumbens ၏ VTA ပြင်းပြင်းထန်ထန် innervate အာရုံခံ၏အာရုံခံ, ဤ mesolimbic လမ်းကြောင်းအလွဲသုံးစားမှုအများစုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစွဲလမ်းနေတဲ့ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဒါကလမ်းကြောင်းကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်နေ့စဉ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ hedonic နှင့်လှုံ့ဆျောရှုထောင့်မှအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ အဆိုပါ orexin အာရုံခံထိုကဲ့သို့သောအစားအစာသို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက် (အဖြစ်ဆုလာဘ်များက activated နေကြတယ်64, 68), နှင့် orexins တိုက်ရိုက် OX1R နှင့် OX2R မှတဆင့် VTA ၏အာရုံခံခြင်းနှင့်နျူကလိယ accumbens excite (69, 70) ။ Orexins လည်း (များစွာသောနာရီများအတွက်ဆဲလ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် NMDA receptors ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် VTA အာရုံခံပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားအောင်30, 31) ။ နှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်မှုတစ်ခု OX1R ရန်နှင့်အတူ pretreatment ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်အဖြစ်ရေရှည်အလားအလာဤပုံစံ (ကိုကင်းနှင့်အတူထပ်တလဲလဲကုသကြွက်များ၌တွေ့မြင် locomotor ာင်းအခြေခံစခွေငျးငှါ30, 71) ။ ထို့ကြောင့် orexins နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါး, အစားအစာ, သို့မဟုတ်အခြားဆုလာဘ်ရှာတိရိစ္ဆာန်များလှုံ့ဆော်ကြောင်းလမ်းကြောင်းအတွက်လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ orexin အာရုံခံလည်း (စိတ်ဖိစီးမှုအချို့ပုံစံများကိုရန်မူအကျင့်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ72) ။ ထိုကဲ့သို့သောခြေလျင်စျေးမှာအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှု (corticotropin-releasing အချက်ကနေတဆင့်, အ orexin အာရုံခံကိုသက်ဝင်အများဆုံးဖွယ်ရှိ73) ။ သူတို့ရဲ့လှောင်အိမ်တစ်ခုကျူးကျော် mouse ကို၏စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါ, orexin peptide နောက်ကောက်ကြွက် (ရိုင်း-type အမျိုးအစား (WT) ကြွက်ထက်သွေးဖိအားများနှင့်ရွေ့လျားအတွက်သေးငယ်တိုးပြီ74) ။ ထို့အပြင် OX1R / OX2R ရန် almorexant (အမျိုးမျိုးသောဖိအား, သတိဝီရိယ၏မြင့်မားသောအဆင့်လိုအပ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းစေ75) ။ သို့တိုင်ရှိ orexin ရန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျှော့ချကြောင်းအနည်းငယ်သာသက်သေအထောက်အထားပင်ဖြစ်သည်, ထိုသို့ orexins လွတ်လပ်စွာ arousal အပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှု၏ဖိစီးမှုကိုတုံ့ပြန်ထိန်းညှိခြင်းရှိမရှိတစ်ပွင့်လင်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါ orexin peptides လည်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဇီဝြဖစ်သြဇာလွှမ်းမိုး။ Orexins တိုက်ရိုက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသေံထိန်းညှိကြောင်းအာရုံခံ excite (76, 77), နှင့် orexins သွေးဖိအား, နှလုံးခုန်နှုန်း, စာနာသေံနှင့် plasma norepinephrine တိုးမြှင့် (78) ။ orexin peptide နောက်ကောက်ကြွက်အနည်းငယ်နိမ့်သွေးဖိအားရှိသည်, နှင့် orexin အာရုံခံချို့တဲ့ကြွက် (ကြွင်းသောအရာကာလအတွင်းအနိမ့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ရှိသည်နှင့်အနည်းငယ်အဝလွန်ကြောင့်သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်, orexins ဖြစ်ကောင်း Basal ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသေံနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်မှုနှုန်းအပေါ်သေးငယ်တဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိ35, 79, 80) ။ တကယ်တော့, narcolepsy နှင့်အတူများစွာသောလူ (ပုံမှန်ထက်လျော့နည်းစားသုံးခြင်းရှိနေသော်လည်းအနည်းငယ်အဝလွန်နေကြသည်81, 82) ။ orexin peptide နောက်ကောက်ကြွက် (ပုံမှန်ထက်အများကြီးလျော့နည်း locomotor လှုပ်ရှားမှုရှိသည်အဖြစ်ဤသည်, တစ်ဦးအောက်ပိုင်းဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းသည်သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းလျော့နည်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်51, 83).
အတူတူစဉ်းစား, ဒီအမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှုများ orexin neuropeptides arousal အများအပြားရှုထောင့်ကိုသြဒိနိတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Orexins မြှင့်တင်ရန်နှင့်နိုးနိုးကွားကွားတည်ငြိမ်, REM sleep ကိုတားစီးနှင့်ထိန်းညှိများနှင့်စက်ခေါင်းများနှင့်စာနာသေံတိုးမြှင့်။ အများစုမှာဖွယ်ရှိခြင်း, orexin စနစ်နိုးကာလတစ်လျှောက်လုံးပါဝင်နေသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်၏အလားအလာကိုအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ပြင်ပအချက်ပြမှုများအဖြစ်ပြည်တွင်းရေးအချက်ပြမှုများအားဖြင့်မောင်းနှင်သည့်အခါကအထူးသဖြင့်တက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ရှိကုထုံး၏ကန့်သတ်မှုနှင့်အတူ coupled ယင်းတွေ့ရှိချက် arousal လျှော့ချခြင်းနှင့်အိပ်မပျော်တိုးတက်အောင်များအတွက်ဝတ္ထုနှင့်ရွေးချယ်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ် orexin ရန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အဓိကကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သည်။
အိပ်မပျော်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်မြောက်မြားစွာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်တဲ့ဘုံလက်တွေ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်မပျော်နှင့်အတူပြည်သူ့မကြာခဏအခက်အခဲအိပ်ပျော်ခြင်းစတင်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းရှိသည်, နေ့ခင်းဘက်အကျိုးဆက်များပင်ပန်း, inattention, နှင့်ကျောင်းသို့မဟုတ်အလုပ်နှင့်အတူအခက်အခဲများပါဝင်သည်။ အများစုမှာလူတိုင်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု, နာမကျန်းခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်ဇယားပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောယာယီအိပ်မပျော်ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်လူများ 10-20% နာတာရှည်အိပ်မပျော်-ဆိုလိုသည်မှာရှိသည်, မြဲဒုက္ခတစ်ခုချင်းစီကိုတပတ်3ညထက်ပိုအိပ်ပျော်နေသော (84, 85) ။ အိပ်မပျော်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုမကြာခဏ (ပိတ်ဆို့မှုကိုနှလုံးပျက်ကွက်သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါသူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာအထိနေ့ခင်းဘက်ပင်ပန်းဆင်းရဲစိတ်ဓါတ်များ, အသက်ကိုရတတ်၏ချို့ယွင်းအရည်အသွေးအတွေ့ကြုံခံစား86) ။ အိပ်မပျော်နှင့်အတူလူကိုလည်းကုန်ထုတ်စွမ်းအား, အလုပ်ပျောက်ဆုံးမြင့်မားမှုနှုန်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု (ဖွံ့ဖြိုးဆဲတစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်လျှော့ချပါပြီ87, 88) ။ 1995 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အိပ်မပျော်ဖို့ attribute ကတိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲ $ 14 ဘီလျံ (အတူတစ်နှစ်လျှင် $2ဘီလီယံခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်89), နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ယခုဆက်ဆက်ပိုများသည်။
(အိပ်မပျော်တစ်ဦးချင်းပြတ်တောက်အိပ်ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်သည့်အတွက်ရောဂါဖြစ်တယ်, အချက်အမျိုးမျိုးအိပ်ပျော်ခြင်းပိုမိုဆိုးဝါးလာနိုင်ပါတယ်90) ။ အိပ်မပျော်အမျိုးသမီးများနှင့်အဟောင်းများလူကြီးများတွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့သည်နှင့်စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ဖောက်ပြန်, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူလူဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောမမှန်အိပ်ရာဝင်ချိန်, မိုးသည်းထန်စွာဖိန်းအသုံးပြုမှုနှင့်အရက်မှီခိုအဖြစ် Maladaptive အပြုအမူတွေကိုမကြာခဏကူညီသည်။ အိပ်မပျော်လည်းထိုကဲ့သို့သောအတွင်းပိုင်းကိုယ်ထည်နာရီလိုချင်သောအိပ်ရာဝင်ချိန်နှင့်အတူ synchrony ထဲကဖြစ်သည့်အတွက်နာကျင်မှု, အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်, အညစ်ခြေထောက် syndrome ရောဂါနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian စည်းချက်မမှန်အဖြစ်အိပ်ပျော်ခြင်းနှောင့်အယှက်ကြောင်းမမှန်နှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ရံဖန်ရံခါခြင်း, အိပ်မပျော်ခြင်းမရှိသိသာဆေးဘက်သို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါအကြောင်းမရှိရှိပြီးမူလတန်းအိပ်မပျော်စဉ်းစားသည်။ ထို့ကြောင့်အများအပြား Clinician လူနာရဲ့စိတ်ကျရောဂါ, counterproductive အပြုအမူတွေ, သို့မဟုတ်အခြားတိုး။ လေးစေသောအကြောင်းရင်းများ (ကုသပေါ်တွင်ပထမဆုံးအာရုံစူးစိုက်91), ဒါပေမဲ့အဲဒီချဉ်းကပ်တခါတရံမလုံလောက်သောသို့မဟုတ်လက်တွေ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, များစွာသောလူနာအိပ်ပျော်ခြင်း-မြှင့်တင်ဆေးဝါးများမှအကျိုး။
သမားတော်များမကြာခဏဂါဘမြို့သားများ၏အပြုသဘောဆောင် allosteric modulator တွေကိုနေသော benzodiazepine အဲဒီ receptor agonists (BzRAs), နှင့်အတူအိပ်မပျော်ဆက်ဆံပါA ကျယ်ပြန့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုတားစီးကြောင်းအချက်ပြ။ Nonbenzo-diazepines (ဥပမာ zolpidem, zaleplon) ရိုးရာ benzodiazepines (ဥပမာ lorazepam, diazepam) မှဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာကွာခြားနှင့်အချို့ဦးစားသည့်αခညျြနှောငျ1 အဆိုပါဂါဘမြို့သား၏ subunitA အဲဒီ receptor ။ သူတို့ဘယ်လိုအိပ်စက်ခြင်းမသိနိုင်ပါဘူးမြှင့်တင်ရန်, ဒါပေမဲ့သူတို့နိုးထ-မြှင့်တင်အာရုံခံ၏ GABAergic တားစီးမြှင့်တင်ရန်နှင့်တကမ္ဘာလုံး cortical လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျစေနိုင်တယ်။ BzRAs မကြာခဏအိပ်ပျော်စတင်ခြင်းအလျင်အမြန်အိပ်ပျော်ရာမှ arousal ၏နံပါတ်လျှော့ချနှင့်အိပ်စက်ခြင်း၏စုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ (လည်းနေ့ခင်းဘက်ရွှင်လန်းအတွက်တိုးတက်မှုများပြသခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာဖြစ်ခြင်းပါပြီ92) ။ (BzRAs မှသည်းခံစိတ်ဆန်းဖြစ်ပြီး, nonbenzodiazepines နှစ်ခုလေ့လာမှုများအထိ6လကြာကောင်းသောထိရောက်မှုကိုပြသကြ92, 93).
ထိုကဲ့သို့သော trazodone, amitriptyline နှင့် doxepin အဖြစ် Sedating စိတ်မကျဆေး Antidepressants သူတို့ concomitant စိတ်ကျရောဂါတိုးတက်စေနိုင်ပြီးသည်းခံမှုနှင့်မှီခိုစေလျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ကောင်းသောကွောငျ့, အိပ်မပျော်ကုသမှုအတွက်လည်းလူကြိုက်များကြသည်။ ဘယ်လိုဒီဆေးတွေအိပ်ပျော်ခြင်းမြှင့်တင်ရန်ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ထိုကဲ့သို့သော serotonin, histamine, norepinephrine နှင့် acetylcholine အဖြစ်နိုးထ-မြှင့်တင် neurotransmitters ၏ဆိုးကျိုးများအားပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်အဲဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်။ စိတ်မကျဆေး Antidepressants လူကြိုက်အများဆုံးညှို့ကြားတွင်ရှိပါတယ်ပေမယ့်, အိပ်မပျော်မှာသူတို့ရဲ့ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုအပေါ်နည်းနည်းလက်တွေ့သုတေသန (ရှိ94).
သည်အခြားဆေးဝါးများ၏တစ်ဦးကအမျိုးမျိုးအိပ်မပျော်ဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုကြသည်။ melatonin နှင့်က melatonin agonist ramelteon အိပ်ပျော်ခြင်းစတင်ခြင်းတိုးတက်အောင်မှာအတန်အသင့်ထိရောက်သောဖြစ်ကြပြီး (ရံဖန်ရံခါခေါင်းကိုက်ခြင်းမှတပါးအနည်းငယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိ95) ။ မျှော်လင့်အဖြစ် Ramelteon အဖြစ်ကျယ်ပြန့်အိပ်စက်ခြင်းအတွက်တိုးတက်မှုများကျိုးနွံဖြစ်ကြပြီးလူနာ BzRAs ကကမ်းလှမ်းသက်သာခြင်း၏အနည်းငယ်သာတွေ့ကြုံခံစားဖြစ်ကောင်းသောကွောငျ့, သတ်မှတ်ထားသောနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ထိုကဲ့သို့သော olanzapine အဖြစ် Antipsychotics အလွန်သက်သာစေသောဆေးကိုပေးစေနိုင်တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုအတော်လေးမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ပွားမှုရှိသည်။ အဆိုပါ antihistamine diphenhydramine over-the-counter အိပ်ပျော်နေတဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့များအတွက်ရေပန်းစားသည်, သို့သော်စိတ်မကျဆေး Antidepressants နှင့်ဝသကဲ့သို့, အနည်းငယ်လေ့လာမှုများဒီနှင့်အခြားအဟောင်းများကိုဆေးများ၏လက်တွေ့ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပါပြီ။
အိပ်မပျော်၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုအများစုမှာမူးယစ်ဆေးဝါးများကျယ်ပြန့်သရုပ်ဆောင်ဂါဘမြို့သား, monoaminergic နှင့် cholinergic စနစ်များအတွက် neurotransmission ပြောင်းလဲဒါသည်ဤဆေးဝါးများဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ကို (အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးစားပွဲတင် 1) ။ ဂါဘမြို့သားဦးနှောက်ထဲတွင်မူလတန်း inhibitory neurotransmitter ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သူတို့အအုပ်ချုပ်သိမှတ်ခံစားမှု, သွား, လက်ကျန်ငွေနှင့်စိတ်ဓါတ်များအပါအဝင်နီးပါးတိုင်းအမူအကျင့်စနစ်, သက်ရောက်သည်။ BzRAs ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းစွာသည်းခံသော်လည်း, နံနက်ယံ၌သက်သာခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြူဆိုင်းအထူးသဖြင့်ကြာကြာ-သရုပ်ဆောင်အေးဂျင့်များနှင့်အတူ, bothersome နိုင်ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါလူနာဆေးထိုး၏အချိန်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရပ်များအတွက်သတိမေ့ခြင်းရှိစေခြင်းငှါ, ကွာခဏ, BzRAs sleepwalking နှင့်အလားတူအပြုအမူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ တစ်ဦး BzRA ရပ်တန့်ပြီးနောက်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုညအိပ်မပျော်ပြန်ခုန်ထွက်အဓိကအားဖြင့်ရေတိုသရုပ်ဆောင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျရောဂါသာမန်ဆေးများနှင့်အတူတစ်ဘုံစိုးရိမ်ပူပန်မှုမဖြစ်ပေမယ့်ဒီ sedatives အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ပိုမိုဆိုးဝါးလာနိုင်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလူကြီးများအတွက်, ကျရောက်, ဒဏ်ရာများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများ (BzRAs နှင့်စိတ်မကျဆေး Antidepressants နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူပိုပြီးဘုံများမှာ96, 97) ။ BzRAs ၏မှီခိုနှင့်အလွဲသုံးစားမှု (အထူးသဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုတစ်သမိုင်းနှင့်အတူလူနာအတွက်တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိနိုင်ပါသည်98, 99).
သမားရိုးကျညှို့နှင့် orexin ရန်၏အလားအလာအပေါ်သက်ရောက်မှုများ၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ။ သမားရိုးကျမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်နေကြပါတယ်, ဒါပေမယ့်နည်းနည်း orexin ရန်များ၏လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ထိုကဲ့သို့သောနံနက်သက်သာခြင်းအဖြစ်တချို့ကဆိုးကျိုးများ ...
တချို့ကဆေးသမား BzRAs ထက်ပိုမိုလုံခြုံဖြစ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ရိပ်မိပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုယခင်နှင့်ပိုမိုဘုံဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ BzRAs နှင့်အတူအမျှဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနေ့ခင်းဘက်သက်သာခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများပါဝင်နိုင်ပါသည်။ anticholinergic ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူစိတ်မကျဆေး Antidepressants ခြောက်သွေ့တဲ့ပါးစပ်သို့မဟုတ် urinary retention ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး, noradrenergic အချက်ပြပိတ်ဆို့သောသူတို့ကိုရံဖန်ရံခါ orthostatic hypotension ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ပုံမမှန်ခြင်းလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါသည်။ Antipsychotics hypotension, ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် extrapyramidal တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး, antihistamines ရှိနေဆဲဟုသက်သာခြင်း, ချို့ယွင်းသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ orexin system ကိုအဓိကအား arousal အားပေးအားမြှောက်သောကြောင့်, orexin ရန်ရွေးချယ်အိပ်ပျော်ခြင်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်နည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေရန်အလားအလာရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ orexin ရန်အမှန်တကယ်ရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါးလျော့ချကြောင်းပြသကြပါပြီအဖြစ်မှီခိုနေနှင့်အလွဲသုံးစားမှု (တစ်စိုးရိမ်စရာလျော့နည်းဖြစ်သင့်69, 100-102) ။ အဆိုပါ orexin system ကိုတိုက်ရိုက်ချိန်ခွင်လျှာသို့မဟုတ်သွားထိခိုက်စေသောမျှသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိအဖြစ်မညီမမျှနှင့်ရေတံခွန်, ပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ orexin ရန်သိသိသာသာအသက်ရှူစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်သွေးဖိအားကိုအကျိုးသက်ရောက်မနေသင့်အဖြစ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲ၏အကျိုးဆက်များလွန်းကိုရည်မှတ်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ REM အိပ် disinhibition အပါအဝင် orexin ရန်၏အလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ကိုအောက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်, ဒါပေမယ့်ခြုံငုံများစွာသောသုတေသီများဒီဆေးတွေကလက်ရှိဆေးဝါးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအများအပြားမပါဘဲအိပ်ပျော်ခြင်းမြှင့်တင်ရန်သင့်ကြောင်းတွက်ဆထားကြောင်းသိရသည်။ orexin ရန်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဝတ္ထုယန္တရားရှိသည်ကြောင့်လည်း, သူတို့ကတခြားအေးဂျင့်ထိရောက်မှုကိုတွေ့ကြသူလူနာများကိုအတွက်အိပ်မပျော်တိုးတက်လာဖို့အလားအလာရှိသည်။ ယခုလမ်းအောက်မှာလက်တွေ့လေ့လာမှုများပိုကောင်း orexin အဲဒီ receptor ရန်၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကန့်သတ်သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။
အတော်ကြာအုပ်စုများလျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အသေးစား-မော်လီကျူး orexin ရန်သွင်ပြင်လက္ခဏာ (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်, ကိုးကားကြည့်ရှုခဲ့ကြ 103-106) ။ ဤအပေါင်းများအတော်များများအစွမ်းထက်ကြွက်နှင့်ခွေးအတွက်အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်, နှင့် OX1R / OX2R almorexant antagonists နှင့် MK-4305 (လူသားတွေအတွက်အိပ်စက်ခြင်းမြှင့်တင်ရန်107, 107a).
ရုံ orexins ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပြီးနောက်, GlaxoSmithKline (GSK) (heterocyclic ယူရီးယားဒြပ်ပေါင်းများကိုတစ်စီးရီးအပါအဝင်ရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်108-110) ။ ဒါဟာအဆင်သင့် preclinical pharmacokinetics ရှိပြီး (အလွယ်တကူရရှိနိုင်သောကွောငျ့ဤအများထဲတွင်သည် OX1R ရန် SB-334867 ကျယ်ကျယ်လေ့လာခဲ့ထားပြီးစားပွဲတင် 2) ။ ၎င်းဆေးများသည် OX1R နှင့်နှိုင်းစာလျှင် ၅၀ ဆပိုမိုများပြားသည်။ သို့သော်၎င်းဆေးများသည် receptors နှစ်မျိုးလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့်မြင့်မားသောဆေးများကို အသုံးပြု၍ Vivo လေ့လာမှုများကိုသတိကြီးစွာကြည့်ရှုသင့်သည်။ ထို့အပြင် GSK သည်အခြားရွေးချယ်ရန်ဆန့်ကျင်သူများအကြောင်းကိုဖော်ပြထားသည်။ SB-50 နှင့် SB-2၊ လူသား OX408124R အတွက်စည်းနှောင်မှုလေ့လာမှုများတွင် ၅၀ ခေါက်ရွေးချယ်မှုနှင့် SB-410220၊108, 109, 111, 112) ။ 2009 ခုနှစ်, GSK SB-649868 တစ်ဦးကို dual OX1R / OX2R ရန်, ကြွက်များနှင့် marmosets တွေကို (ထဲမှာ REM နှင့် Non-REM sleep ကိုရာထူးတိုးကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်113) ။ in-depth ကိုဒီမော်လီကျူးအပေါ် preclinical ဆေးဝါးဗေဒ data တွေကိုထုတ်ဝေခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့် SB-649868 အဆင့် II ကိုလက်တွေ့လေ့လာမှုများ (ထဲသို့ဝင်လိုက်ပါတယ်114).
အဓိက orexin ရန်နှင့် OX1 နှင့် OX2 receptors ဘို့မိမိတို့ဆှဖှေဲ့တချို့၏အဆောက်အဦများ
2007 ခုနှစ်, Actelion IC နှင့်တကွ, တစ်ဦးအစွမ်းထက် dual-orexin အဲဒီ receptor ရန် almorexant ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် (ACT-078573) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ50 အသီးသီးလူ့ OX13R နှင့် OX8R များအတွက်ဆဲလ်-based assay အတွက် 1 nm နှင့်2nm ၏တန်ဖိုးများကို, (103, 107) ။ Almorexant (OX1R တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ရန်နှင့် OX2R တစ် noncompetitive ရန်ဖြစ်ပေါ်လာသော115) ။ ဒါဟာ 90 သည်အခြားအလားအလာပစ်မှတ်ထက်ပိုမိုများအတွက်အနည်းငယ်သာဆှဖှေဲ့နှင့်အတူမြင့်မားရွေးချယ်ဖြစ်၏ ဒါကြောင့်ကြွက်နှင့်လူ့ချည်နှောင် ~ 99% ပရိုတိန်း၏, ဒါကြောင့်ကြွက် (8-34%) နှင့်ခွေး (18-49%) အတွက်ပါးစပ်ထိုးနှင့်အတူအလယ်အလတ် bioavailability မှအနိမ့်ရှိပါတယ်, ထိုသို့ကောင်းစွာဦးနှောက်စိမ့်ဝင်သွားတယ်။ Almorexant T က (ခွေးအတွက်ကောင်းသောစုပ်ယူရှိပါတယ်max ကို 0.5-2 ဇ၏ဖျက်သိမ်းရေးဝက်ဘဝနှင့်အတူ = 8-9 ဇ) ။ ကြွက်များတွင် almorexant ၏ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးထိုး-ရသည်တက်ကြွစွာကာလအတွင်းပေးထားသည့်အခါ (ကုသမှု5ညကျော်ထိရောက်မှုမရှိအရှုံးနှင့်အတူ, Non-REM နှင့် REM sleep ကိုတိုးမြှင့်107, 116) ။ ဆနျ့ကငျြ, zolpidem နဲ့ကုသကြွက် (အသေးစိတ် Non-REM အိပ်စက်ခြင်းပေမယ့်ဒီထက် REM အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ထိုး၏အနည်းငယ်ညကျော်သည်းခံစိတ်တီထွင်107) ။ almorexant ကြွင်းသောအရာကာလအတွင်းပေးသောအခါသို့သော်ကြောင့် orexin သေံနှင့်ပါတီအား drive ကို (အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့်အခါမူးယစ်ဆေးအထိရောက်ဆုံးကြောင်းအကြံပြု, အိပ်စက်ခြင်းအပေါ်လျော့နည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့107, 117) (ဒါပေမယ့်လည်းကိုးကားစရာတွေ့မြင် 112) ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသေံအပေါ် almorexant ၏ဆိုးကျိုးများအတော်ပင်သေးငယ်တဲ့ပါ၏ စူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုခဲ့ကြွက်အတွက်ကြောင့်အနည်းငယ်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးဖိအားကိုလျှော့ချပေမယ့်အရာကြွင်းလေကာလအတွင်းအနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ (75) ။ ခွေးမှာ, (ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်, သွေးပေါင်ချိန်, ဒါမှမဟုတ်နှလုံးခုန်နှုန်းအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုမရှိဘဲ locomotor လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချ107) ။ ဒီအဆင်သင့်ဆေးဝါးဗေဒနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ခိုင်မာတဲ့အိပ်ပျော်ခြင်း-မြှင့်တင်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူ Actelion ထို့နောက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် almorexant ၏လက်တွေ့လေ့လာမှုများ, လိုက်ကြ၏။
Merck အများအပြားကွဲပြားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအတန်း (ထဲမှာ orexin အဲဒီ receptor ရန်တစ်အကွာအဝေးတီထွင်ထားသည်104, 105, 118, 119) ။ Dora-1 (က proline bis-ကြားတွင်စီးရီးထဲကအစွမ်းထက်, Dual orexin အဲဒီ receptor ရန်ဖြစ်ပါသည်120) ။ ဒါဟာတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အဆင်သင့် pharmacological ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ် OX1R နှင့် OX2R နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအမွငျ့မားဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်, ကောင်းသောဦးနှောက်ထိုးဖောက်မှုရှိပြီး, ကြွက်များတွင်အတန်အသင့် bioavailable ဖြစ်ပါတယ်။ Vivo ခုနှစ်, Dora-1 လုပ်ကွက်အတွက် orexin အားဖြင့်သွေးဆောင်ရွေ့လျားအတွက်တိုးနှင့်ထိုး-ရသည် (ကြွက်များတွင်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်121) ။ နောက်ထပ်နှုတ် bioavailable dual-orexin အဲဒီ receptor ရန်, Dora-5 တစ်ဦးထံမှအစပြု N ကို, N ကို-disubstituted-1,4-diazepane ငြမ်း (118, 122) ။ ဤသည်ဒြပ်ပေါင်းများဆဲလ်-based assay အတွက်အစွမ်းထက်သည်နှင့်ကြွက် dorsal raphe အာရုံခံအတွက်ပစ်ခတ် orexin-A-သွေးဆောင်အာရုံခံ antagonizes ။ Dora-5 (လည်းကြွက် locomotor လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချခြင်းနှင့် REM နှင့် Non-REM sleep ကိုတိုးမြှင့်နေချိန်တွင်ထိရောက်စွာတက်ကြွစွာနိုးထလျှော့ချ122) ။ MK-4305 OX1R IC (ဆဲလ်-based assay အတွက် nanomolar ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းပြခြင်း, diazepane စီးရီးထဲကအစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် dual-orexin အဲဒီ receptor ရန်ဖြစ်ပါသည်50 = 50 nm, OX2R IC50 = 56 nM) နှင့်> လက်ခံသူနှင့်အင်ဇိုင်းပေါင်း ၁၇၀ ပါသော panel ကို ၆၀၀၀ ဆရွေးချယ်သည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်နှုတ်အားဖြင့်ဇီဝရရှိနိုင်ပြီး ဦး နှောက်တွင်ကောင်းမွန်စွာထိုးဖောက်နိုင်ပြီးကြွက် ဦး နှောက်တွင် orexin receptor ထည်ကိုဖော်ပြသည်။ ကြွက်များအားအိပ်ပျော်စေသည့်လေ့လာမှုများတွင် ၁၀ ရက်၊ ၃၀ နှင့် ၁၀၀ မီလီဂရမ်ကီလိုဂရမ်ဖြင့်နှုတ်ဖြင့်ထိုးသည့်အခါ MK-6,000 သည်ဆေးဖြင့်မှီခို။ တက်ကြွသောနှိုးမှုကိုလျှော့ချပြီး REM နှင့် REM မဟုတ်သောအိပ်စက်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။1။ ဤအအားပေးအားမြှောက် preclinical ရလဒ်များကိုကထောက်ခံ, MK-4305 (လက်တွေ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်123).
ဟော့ဖ်မန်း -La Roche သည် OX2R ကျော် OX900R နှင့်ချိတ်ဆက်ရာတွင်အဆ ၉၀၀ အထိရွေးချယ်မှုကိုပြသသည့် EMPA ဟုခေါ်သော OX2R ဆန့်ကျင်ဘက်ပညာရှင်ကိုတီထွင်ခဲ့သည် (124) ။ ဤသည်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခု orexin-B ကအပိုင်းအစအားဖြင့်သွေးဆောင်ရွေ့လျားအတွက်တိုးအလိုအလျောက်စက်ခေါင်းများနှင့်လုပ်ကွက်လျော့ကျစေပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အိပ်ပျော်ခြင်း-မြှင့်တင်သက်ရောက်မှုထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
ဂျွန်ဆင်နှင့်ဂျွန်ဆင်ရှိသုတေသီများကအစွမ်းထက်သည့်အစားထိုး 4-phenyl- [1,3] dioxanes များကို> OX800R ကိုဆန့်ကျင်သည့်အဘို့> အကြိမ် ၈၀၀ ရွေးချယ်မှုဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။125) ။ ဤအုပ်စုမကြာသေးမီက (ထို JNJ-10397049 (တစ်ဦး OX2R ရန်) သတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့် almorexant သိသိသာသာတိုးလာ REM နှင့် Non-REM အိပ်စက်ခြင်းနှင့်တက်ကြွစွာနိုးထလျှော့ချ112) ။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, OX1R ရန် SB-408124 orexins ၏ပါတီအား-မြှင့်တင်သက်ရောက်မှုအဓိကအား OX2R သို့မဟုတ် OX1R နှင့် OX2R ပေါင်းစပ်ကကမကထပြုခဲ့သောယေဘုယျလေ့လာရေး supporting, ကြွက်များတွင်အိပ်စက်ခြင်းအပေါ်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့သည်။
အခြားကုမ္ပဏီများ (orexin ရန်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပေမယ့်မရရှိနိုင်ပါဒေတာစသည်တို့စရိုက်လက္ခဏာတွေအတွက်အဓိကအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားရှိပါသည်ကိုးကားကြည့်ရှု 105 နှင့် 106 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအတွက်) ။ Banyu Tsukuba သုတေသနအင်စတီကျု့မှ OX45R ကျော် OX250R အတွက် ၄၅ မှ ၂၅၀ အထိရွေးချယ်သော tetrahydroisoquinoline amide ဒြပ်ပေါင်းများကိုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတွင်ပျော်ဝင်နိုင်မှုနှင့်လက်ခံသူ ၅၀ နှင့်အင်ဇိုင်းများပါ ၀ င်သည်။126) ။ Sanofi-Aventis OX20R ကျော် OX600R များအတွက် 1-ခွံကိုရွေးဖို့ OX5R များအတွက် 20- ထံမှ 1-ခြံအထိကို select နှင့်အတူအတော်ကြာရန်အဘို့အမူပိုင်ခွင့်အဖြစ် 2- ပိုမိုမျှတရန်တင်ပြခဲ့သည်။ Biovitrum OX30R များအတွက် MM2မှ 1 nm ကနေအထိအာနိသင်နှင့်အတူဒြပ်ပေါင်းများကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
အဘယ်သူမျှမ orexin အဲဒီ receptor ရန်စည်းမျဉ်းအေဂျင်စီများအားဖြင့်ခွင့်ပြုချက်များအတွက်တင်သွင်းခဲ့ကြပေမယ့် Actelion, GlaxoSmithKline နှင့် Merck တစ်ခုချင်းစီကိုအိပ်မပျော်များအတွက် orexin အဲဒီ receptor ရန်၏တက်ကြွစွာလက်တွေ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။
Actelion (2007 အတွက် almorexant ၏အိပ်စက်ခြင်း-မြှင့်တင်သက်ရောက်မှုအပေါ်အားတက်စရာအဆင့်ကျနော် data ကိုတင်ပြ107) ။ ကျန်းမာလူပျိုတို့မှာတော့ almorexant ကောင်းစွာအဘယ်သူမျှမလေးနက်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ (နဲ့အတူ MG 1000 အထိသည်းခံခဲ့သည်107) ။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းလျင်မြန်စွာစုပ်ယူ (T ကပြသmax ကို = 1.0 ထံမှဆေးများမှာပလာစမာ AUC တိုင်းတာအပေါ်အခြေခံပြီးနာရီ 2.3 မှ 100) နှင့်ထိတွေ့မှုအတွက်အချိုးကျတိုးမီလီဂရမ် 1000 မှ MG ။ Almorexant 6.1 နာရီ 19.0 တစ်ဝက်ဘဝကိုအတူ biphasic ဖျက်သိမ်းရေး kinetics ရှိခဲ့ပါတယ်။ 200 မှတက် 1000 ၏ဆေးများသိသိသာသာ (အိပ်စက်ခြင်း၏ပမာဏတိုးမြှင့်ခြင်း, အိပ်၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားချက်တွေကိုတိုးမြှင့် non-REM sleep ကိုရိုက်ထည့်ဖို့အောင်းနေချိန်လျှော့ချ MG107).
တစ်ဦးအဆင့် II ကို, မူလတန်းအိပ်မပျော်နှင့်အတူ 147 လူနာကို double-မျက်စိကန်းသောလေ့လာမှုမှာတော့ 200 သို့မဟုတ် 400 almorexant (ထိုညဉ့် ~ 75% အထိ ~ 85% ၏အခြေခံကနေ့အိပ်စက်ခြင်းကာလထိုး-ရသည်တိုးမြှင့်အိပ်စက်ခြင်းထိရောက်မှုမတိုင်မီပေးထား MG127) ။ အလားတူဆေးများလည်း 35-55 မိနစ်အိပ်ပျော်ခြင်းစတင်ခြင်းပြီးနောက်နိုးထတိုးတက်စေရန်တဲ့သဘောထားကိုခဲ့မြဲအိပ်ပျော်ခြင်းဖို့အောင်းနေချိန်ကိုတိုစေ။ အိပ်စက်ခြင်းအောင်းနေချိန်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းပမာဏ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆွဲဆောင်မှုလည်းတိုးတက်လာဖို့တော်မှာ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း REM sleep ကိုရိုက်ထည့်ဖို့အောင်းနေချိန်အနည်းငယ်ရှည်ခဲ့ပါတယ်နှင့် REM အိပ်စက်ခြင်း၏ပမာဏအနည်းငယ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ 2008 ကတည်းက Actelion 100 မီလီဂရမ်နှင့် 200 မီလီဂရမ်၏ဆေးများမှာ Almorexant နှင့်အတူအဆင့် III ကိုလေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
GlaxoSmithKline 1 နှင့်2မှာသူတို့ရဲ့ OX649868R / OX10R ရန် SB-30 ထိုး-ရသည်တိုးမြှင့်အိပ်စက်ခြင်းကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏အိပ်ပျော်ခြင်း (ဆူညံသံများကနှောင့်အယှက်ခဲ့သည့်အတွက်အိပ်မပျော်တဲ့မော်ဒယ်ထဲမှာ MG ကြောင်းအစီရင်ခံ113) ။ ဤသည်ဒြပ်ပေါင်းလည်းမဆိုကျန်နေတဲ့နံနက်သက်သာခြင်းကင်းမဲ့ပုံရသည်။ အိပ်မပျော်လူနာအတွက်လေ့လာစရာများ (SB-649868 အိပ်ပျော်ခြင်းစတင်ခြင်းပြီးနောက်မြဲအိပ်စက်ခြင်းနှင့်နိုးထဖို့အောင်းနေချိန်လျှော့ချနှင့်စုစုပေါင်းအိပ်ပျော်ခြင်းအချိန်တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသ114) ။ ကြောင့်အနေနဲ့ undescribed preclinical အဆိပ်ရန်, SB-649868 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်းပိုင်းတွင် 2007 အတွက်ကိုင်အပေါ်ထားရှိခဲ့ပါသည်ပေမယ့်လက်ရှိ (အဆင့် II ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်128) ။ GSK အိပ်မပျော်များအတွက် almorexant ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ 2008 အတွက် Actelion နှင့်အတူပူးပေါင်း။
MK-4305 အိပ်မပျော်၏ကုသမှုများအတွက် Merck ကတီထွင်ခံတစ်ဦး OX1R / OX2R ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ဒြပ်ပေါင်းများ (မျက်နှာသာ pharmacokinetic ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကောင်းမွန်သော preclinical ထိရောက်မှုရှိပါတယ်123) ။ 2009 ခုနှစ်, Merck အိပ်မပျော်လူနာ MK-4305 နှင့်အတူအဆင့် II ကိုလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်နှင့် 2010, သူတို့သည် MK-4305 အဆင့် III ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတထဲသို့ဝငျခဲ့ကွောငျးကြေညာခဲ့သည်။
orexin ရန်နှင့်အတူအိပ်ပျော်ရာကနဦးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ဒါတွေကတိုးတက်မှုအိပ်မပျော်အသစ်တစ်ခုကုသမှုအဖြစ် orexin ရန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောထောက်ခံမှုပေး။ အများအပြားကလွတ်လပ်စွာဖွံ့ဖြိုးဒြပ်ပေါင်းများကိုသမားရိုးကျညှို့နှင့်မြင်ပုံစံကနေကွဲပြားဖြစ်ကြောင်း Non-REM နှင့် REM အိပ်စက်ခြင်းအတွက်တိုးနှင့်အတူ, အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများပြသပါ။
ထို့ကြောင့်ဝေး, နည်းနည်းသတင်းအချက်အလက် orexin ရန်များ၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအပေါ်လူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်ပါသည်ပေမယ့်မရရှိနိုင်ပါအထောက်အထားများနှင့် orexin ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ဟောကိန်းထုတ်သက်ရောက်မှု၏အခြေခံပေါ်တွင်တဦးတည်း orexin ရန်အများအပြားသည်လက်ရှိတွင်မရရှိနိုင်ညှို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်ပရိုဖိုင်းကိုရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းငှါ (စားပွဲတင် 1) ။ Orexin ရန်စိုးရိမ်ပူပန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အစုံရှိစေခြင်းငှါ, အပိုဆောင်းလက်တွေ့ data တွေကိုလိုအပ်နေပါသည်။ သို့သော် BzRAs မတူဘဲသူတို့အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ် unsteady သွားဘို့အနည်းငယ်သာအလားအလာရှိသင့်နှင့်စိတ်မကျဆေး Antidepressants sedating မတူဘဲသူတို့ကထိုကဲ့သို့သော orthostasis အဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေဖွယ်မရှိပေ။
နံနက်သို့မဟုတ်နေ့ခင်းအိပ်နိုးထအပေါ်သို့အချက်ပြ orexin ပိတ်ဆို့ဖို့ဆက်လက်ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်, ဒီအိပ် narcolepsy နှင့်အတူလူမကြာခဏနောက်ပိုင်းတွင်နေ့ရက်ကာလ၌နိုးထအပေါ်သို့သတိပေးချက်ခံစားရပြီးတော့အိပ်ချင်သောကွောငျ့က BzRAs နှင့်အတူတင်ဆက်ဘယ်လိုကနေကွဲပြားခြားနားတင်ပြလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်မယ့်နံနက်ယံ၌, တစ်ခုလုံးတစ်နေ့တာအတွင်းအိပ်စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
narcolepsy အတွက်ကြုံတွေ့သည်နည်းတူ, အခြားသောညှို့မတူဘဲ, orexin ရန် REM အိပ်စက်ခြင်းအချို့ dysregulation ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့အစီရင်ခံထားကြပြီမဟုတ်ပေမယ့် Hypnagogic စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းသွက်ချာပါဒ, အိပ်ပျော်ခြင်းစတင်ခြင်းန်းကျင်သို့မဟုတ်နိုးထအပေါ်သို့ပေါ်ပေါက်နိုင်ဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤရောဂါလက္ခဏာတွေစိတ်ပျက်စရာပေမယ့်ခဏဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့လူနာပညာရေးနှင့်ထိုးလျော့ချရေးနှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲဖြစ်သင့်သည်။ ရုတ်တရက်ကျဆုံးဒဏ်ရာထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်, cataplexy များအတွက်အလားအလာပိုကြီးတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါသည်, သေး narcolepsy နှင့်အတူလူမရှိသလောက် (သူတို့ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကာလအတွင်း cataplexy ရှိသည်, အဘယ်သူမျှမ cataplexy အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏မြင့်မားနေသော်လည်းကြွက်, ခွေးနှင့်လူသားတွေအတွက် almorexant နှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်107) ။ သို့သျောလညျး, (ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်ခိုင်ခံ့, အပြုသဘောစိတ်ခံစားမှု (ဥပမာ, ကြီးစွာသောဟာသမှာရယ်မော) ကဖြစ်ပေါ်သည်ကို ထောက်. , ဤလေ့လာမှုများ cataplexy များအတွက်စိတ်သဘောထားသတိမမူခဲ့ကြပေမည်ကဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာထုတ်ယူနိုင်ရန်ခဲယဉ်းသည်57, 129) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တိရစ္ဆာန်များနှင့်ဘာသာရပ်များ cataplexy ဆီသို့မည်သည့်သဘောထားကိုရှာဖွေ Install လုပ်နိင်ကြပါပြီနိုင်သည့်အများဆုံးလေ့လာမှုများ, အိပ်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ အများစုမှာဖွယ်ရှိ, cataplexy သာထိုကဲ့သို့သောလူနာတစ်ဦး orexin ရန်၏မြင့်မားထိုးတာပြီးနောက်နိုး-ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးလျှင်အဖြစ်ရည်ရွယ်လက်တွေ့အသုံးပြုမှုနှင့်အတူကိုက်ညီမှုပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများတွင်တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
orexins REM အိပ်စက်ခြင်းအပြုအမူရောဂါအဖြစ်လူသိများ REM အိပ်နေစဉ်နိုးနိုးကွားကွားမြှင့်တင်ရန်နှင့် REM sleep ကိုနှိမ်, တဦးတည်း narcolepsy နှင့်အတူအချို့သောလူတွေက Non-REM အိပ်နေစဉ် sleepwalking, အတန်အသင့်စိတ်စိတ်အမွှာမွှာအိပ်ပျော်ခြင်းရှိနိုင်ပါသည်ကြောင့်ထူးဆန်းနှင့်အံ့သြစရာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, နှင့်လှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစား (130) ။ ဖြစ်နိုင်သည်အဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေ orexins ထုတ်လုပ်ရှိသူများထက်အခြားအာရုံခံမှနာတာရှည် orexin ချို့တဲ့သို့မဟုတ်ဒဏ်ရာ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်၏။ ဤအလက္ခဏာတွေလက်ရှိမော်ဒယ်များနှင့်အတူရှင်းပြဖို့ခဲယဉ်းဖြစ်သကဲ့သို့, သူတို့ orexin ရန်နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါရှိမရှိခန့်မှန်းခက်ခဲသည်။ သို့သော်ခွေးအတွက် almorexant (အိပ်ပျော်ခြင်းစဉ်အတွင်းခြေလက်အင်္ဂါများ distal အစိတ်အပိုင်းများ Twitch တိုးလာ107) နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများလှုပ်ရှားမှုများကိုသို့မဟုတ်အိပ်စက်ခြင်း၏အခြားပြတ်တောက်မှုအတွက်စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Orexin အချက်ပြဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိသော mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက်လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်ဟန်, ဤစနစ်လျော့ချလှုပ်ရှားမှုစိတ်ဓါတ်များသို့မဟုတ်လှုံ့ဆျောမှုပိုမိုဆိုးဝါးလာစေနိုင်ပါတယ်။ narcolepsy နှင့်အတူပြည်သူ့စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုပိုမိုမြင့်မားပျံ့နှံ့ရှိစေခြင်းငှါ (131), ဒီလျှော့ချ orexin အချက်ပြခြင်းသို့မဟုတ်နာတာရှည်နာမကျန်းရှိခြင်း၏စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုဟာတိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်လျှင်မသိပေမယ့်။ တနည်းအားဖြင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်းစိတ်ဓါတ်များတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်မပျော်နှင့်အတူအများအပြားလူနာစိတ်ကျရောဂါသင့်သည်အတိုင်း Clinician ခံစားချက်အတွက်မဆိုစသောအပြောင်းအလဲအဘို့စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
BzRAs အသက်ရှူစိတ်ကျရောဂါနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်အဆုတ်ရောဂါပိုဆိုးလာနှင့်အလွန်အကျွံအရက်သို့မဟုတ်အခြား sedatives နှင့်အတူပေါင်းစပ်များတွင်အသုံးပြုအထူးသဖြင့်လျှင်, ဆိုးဝါးနိုင်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ orexin နောက်ကောက်ကြွက် (အတော်လေးသာမန်အခြေခံလေဝင်လေထွက်ရှိသည်အဖြစ်132), က orexin ရန်သိသိသာသာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ drive ကိုလျှော့ချမယ်လို့မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ သို့သော်သူတို့ hypercarbia ဖို့တုန့်ပြန်မှုကိုလျှော့ချစေနိုင်သည်။ CO ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်2 (အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမှုနှုန်းနှင့်ဒီရေအသံအတိုးအကျယ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း, orexin ရန်အထူးသဖြင့်နိုးနိုးကွားကွားနေစဉ်အတွင်း, ဒီတုန့်ပြန်တုံးနိုင်ပါတယ်132, 133) ။ ထိုသို့နီးကပ်စွာထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန်နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ (COPD) သို့မဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကြွက်သားအားနည်းခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဖြစ် hypercarbia နှင့်အတူလူနာအတွက် orexin ရန်, အကဲဖြတ်ရန်ပညာရှိဖြစ်နိုင်သည်။
orexin လူသားတွေအတွက်အစာစားချင်စိတ်သို့မဟုတ်ဇီဝြဖစ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်နေဆဲပေမယ့် narcolepsy နှင့်အတူလူနှင့်ကြွက် (ပုံပုံမှန်ထက်လျော့နည်းစားသုံးခြင်းရှိနေသော်လည်းအနည်းငယ်အဝလွန်ဖြစ်လေ့35, 80, 81) ။ ထို့ကြောင့် orexin ချို့တဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချစေခြင်းငှါ, နာတာရှည်အုပ်ချုပ်လျှင် orexin ရန်ပျော့အလေးချိန်အမြတ်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ဘူး။ လက်တွေ့တွင် orexin ရန်အဓိကအားဖြင့်ညဥ့်အခါပေးတော်မူလတံ့, နေ့ကာလအတွင်းပုံမှန် orexin အချက်ပြညအချိန်တွင်ဇီဝြဖစ်သို့မဟုတ်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအတွက်မဆိုလျှော့ချ offset သငျ့သညျ။
BzRAs နှင့် sedating စိတ်မကျဆေး Antidepressants unsteady သွား, မူးဝြေခင်းထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ကျရောက်ပေမယ့် cerebellum နှင့် vestibular အရေးပါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ orexin အမျှင်များနှင့် receptors (ကင်းမဲ့အဖြစ်ဤအ orexin ရန်နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖြစ်ဖွယ်မရှိပေနိုင်ပါတယ်7, 14) ။ ပုံမှန်မြန်နှုန်းမှာ run Orexin နောက်ကောက်ကြွက် (51, 83), နှင့်တစ်ဦးအလှည့်လှံတံကိုအပေါ် EMPA သို့မဟုတ် almorexant ချိန်ခွင်လျှာကောင်းစွာနဲ့ကုသကြွက် (124, 134) ။ လူသားတွေအတွက် almorexant ၏ရှေ့ပြေးလေ့လာမှုများ (ဟောဒီမှာပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်တခုကိုကံတရားကပြောင်းလဲ 1-3 ဇသာသေးငယ်တဲ့တိုးပြခဲ့ကြ135), က orexin ရန်သိသိသာသာရေတံခွန်၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်ဟုမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်ဒါကြောင့်။
သူတို့ကလူနာ '' ရောဂါလက္ခဏာအချို့ပိုဆိုးလာလို့ Orexin ရန်ဖြစ်ကောင်း narcolepsy နှင့်အတူလူနာအတွက်ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ ဤရွေ့ကားဒြပ်ပေါင်းများကိုအစ (ကထိုကဲ့သို့သောပါကင်ဆန်ရောဂါအဖြစ် orexin ထုတ်လုပ်အာရုံခံဒဏ်ရာရထားတဲ့တခြားပုံမမှန်သည့်အတွက်တစ်နေ့တာအတွင်း narcolepsy ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်နှင့်အကြီးအကျယ်စိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာရှိစေခြင်းငှါ136-138) ။ ထို့ကြောင့်သူတို့အားလူနာအတွက် Clinician အနိမ့်ဆေးများနှင့်အတူကုသမှုစတင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်။
တချို့ကသုတေသီများ (တန်ဖိုးအား narcolepsy အလားတူအပြုအမူသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရှိရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြ139), ဒါပေမယ့်ခြုံငုံကြောင့် orexin ရန်အများအပြားဟာလက်ရှိညှို့ထက်နည်းပါးလာခြင်းနှင့်အန္တရာယ်နည်းပါးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူအိပ်စက်မှုမြှင့်တင်ရန်သင့်ကြောင်းပေါ်လာသည်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ REM အိပ် dysregulation နှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာအဘို့အအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်း, စိတ်စိတ်အမွှာမွှာအိပ်ပျော်ခြင်းအဘို့စောင့်ကြည့်အိပ်ပျော်နေစဉ်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်စိတ်ဓါတ်များပိုမိုဆိုးရွားလာလညျးအရေးကွီးဖွစျလိမျ့မညျနေကြသည်။ နေ့ခင်းဘက်သက်သာခြင်းတစ်နေ့တာအတွင်းသာမန် orexin အချက်ပြခွင့်ပြုကြောင်းအဆင်သင့် kinetics နှင့်အတူဒြပ်ပေါင်းများများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်တာမဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်အိပ်မပျော်လူနာတစ်ဦး orexin ရန်ကနေအများဆုံးအကြိုးရှိနိုငျမညျနညျး ကျနော်တို့အိပ်မပျော်နှင့်အတူလူ (သညျ့မွငျ့မား orexin သေံရှိသည်သောအဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားသိ49), ဒါပေမယ့်အများဆုံးအခြေအနေများအောက်တွင်, orexin အချက်ပြဆိုလျှော့ချရေးလွယ်ကူအိပ်ပျော်ဖို့နဲ့အိပ်စက်ခြင်းဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့လုပ်သင့်ပါတယ်။ ယင်းဆေးဝါးများ orexin သေံမြင့်မားသည်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဇီဝတက်ကြွစွာကာလအတွင်းအိပ်ပျော်ခြင်းဖို့ကြိုးစားနေကြသူဂျက်သုံးနေပြီနှင့်အတူပြောင်းကုန်ပြီလုပ်သားများသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အထူးသဖြင့်ထိရောက်သောဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ကအစ (မြင့်သောစာနာသေံရှိသူအများအပြားအိပ်မပျော်လူနာအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်11) မြင့်မားတဲ့စာနာသေံ (အိပ်ပျော်ခြင်းစတင်ခြင်းနှောင့်နှေးနေသောကြောင့်140) နှင့်စာနာ activation စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဆိုပါ orexin အာရုံခံခြင်းဖြင့် arousal မြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများဘာသာရပ်များအတွက် BzRAs (မညီမမျှနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်141သူတို့ကဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်နိုင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့), ဒါရန် orexin အချို့သောအဟောင်းများလူနာတွေအတွက်ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, orexin အချက်ပြပိတ်ဆို့ကြောင်းမူးယစ်ဆေးစိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်နာကျင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အိပ်မပျော်ခံစားနေရပြီးလူလျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်; orexin ရန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ် benzodiazepines လုပ်ပေးအဖြစ်အာရုံခံတံခါးမြှင့်မသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
Orexin ရန်လည်းပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသနဲ့သူတို့ mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်လုပ်ဆောင်မှုလျော့ချနိုင်သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော bulimia နှင့် nocturnal စားအဖြစ်မမှန်အစာစားခြင်းအဘို့အဝတ္ထုချဉ်းကပ်ပေးနိုငျသညျ။ ကြွက်, ကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး, အရက်, ဒါမှမဟုတ်နီကိုတင်းဟာ OX1R ရန် SB-334867 (လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်အတွက်100-102) ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ (မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး၏ site ကိုမှရွေ့လျား) အေးစက်သောအရပ် preference ကိုအများကြီး orexin အာရုံခံချို့တဲ့ကြွက်နှင့် SB-334867 (နဲ့ကုသကြွက်များတွင်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်69) ။ မကြာသေးမှီကအလုပ်ကိုလည်း SB-334867 ထိုကဲ့သို့သောကင်းသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအဆီအစားအစာ (အဖြစ်အကြိုး, အဓိကလှုံ့ဆော်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းစေကြောင်းအကြံပြု142) ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏ရောဂါလက္ခဏာများ SB-334867 နဲ့ကုသကြွက်နှင့် orexin peptide နောက်ကောက်ကြွက်များတွင်လျှော့ချကြောင့် Orexin ရန်လည်း (မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာနှင့် abstinence ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အတူကူညီစေခြင်းငှါ143, 144) ။ မူးယစ်ဆေး-ရှာငွိမျးခဲ့ပြီးသောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်, စိတ်ဖိစီးမှုများသို့မဟုတ်အခြားတွေကိုအားဖြင့်မူးယစ်ဆေး-ရှာ၏ reinstatement (တစ်ဦး OX1R ရန်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်68, 145) ။ SB-334867 လည်း (ဖြစ်ကောင်းအတူတူပင်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းအသုံးပြုပုံကြွက်များတွင်ပုံမှန်နှင့်မြင့်မားသောအဆီအစားအစာစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေ146, 147) ။ ဒါဟာ (စမွတ်မပြေနိုင်သောမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပင်ကြွက်များတွင်ကိုယ်အလေးချိန်မြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါ148) ။ အဆိုပါ OX1R လူသားများတွင်အလားတူအခန်းကဏ္ဍလျှင်, တစ်ဦးရွေးချယ် OX1R ရန်သိပ်သက်သာခြင်းမရှိဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်စားစရာဘို့တဏှာကိုလျှော့ချလိမ့်မယ်။
ပြောင်းပြန် orexin agonists ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နေ့ခင်းဘက်အိပ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, narcolepsy နှင့်အတူအထူးသဖြင့်သူတို့အဘို့ကျနော်တို့မှာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့-မော်လီကျူး orexin agonist ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ရွေးချယ် orexin အချက်ပြမြှင့်တင်ရန်ကြောင်း allosteric ၎င်း module ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်နိုင်သောဖြစ်နိုင်သည်။ OX2R mesolimbic လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်သာအထောက်အကူပြုလျှင်, ရွေးချယ် OX2R အချက်ပြပိုကောင်းစေပါတယ်တဲ့ဒြပ်ပေါင်းများစွဲများအတွက်အနည်းငယ်သာအလားအလာနှင့်အတူနိုးနိုးကွားကွားမြှင့်တင်ရန်ပေလိမ့်မည်။
အဆိုပါ orexin စနစ်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု arousal နှင့်အိပ်စက်ခြင်း၏ neurobiology သို့အများအပြားထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားတွေအတွက် orexin ရန်၏မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများအားပေးအားမြှောက်နေကြသည်။ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျနော်တို့ကဤဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏ထိရောက်မှု, သူတို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အရာအိပ်မပျော်နှင့်အတူလူနာအများဆုံးအကျိုးရှိမည်အကြောင်းအများကြီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်မျှော်လင့်ထား။
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏စာအရေးအသားကနျြးမာရေးထောက်ပံ့ငွေ NS055367 နှင့် HL095491 အမျိုးသား Institutes ကထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာစာသားပေါ်တီ Mochizuki, JK Walsh နှင့် JJ Renger တို့၏အကြံအစည်မှတ်ချက်များတန်ဖိုးထားတယ်။
အဆိုပါ hypothalamus ၏ dorsomedial နျူကလိယ
, G ပရိုတိန်း-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် Rectifier ရုပ်သံလိုင်းအတွင်း
လျင်မြန်သောမျက်စိလှုပ်ရှားမှု (REM) အိပ်ပျော်ခြင်း
တစ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအိပ်မက်များအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအိပ်ပျော်ရာစင်မြင့်, ဦးနှောက် cortical activation, saccadic မျက်စိလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အရိုးကြွက်သားယေဘုယျသွက်ချာပါဒ
ဒီထက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအတှေးသို့မဟုတ်ပြည့်စုံသတိလစ်မေ့မြောနှင့်နှေးကွေးသော cortical လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအိပ်ပျော်ရာတစ်ဦးစင်မြင့်
အိပ်စက်ခြင်းစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်အဆုံးန်းကျင် dreamlike စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း
နိုးထသို့မဟုတ်သောအခါအပယ် dozing အပေါ်သို့ရွှေ့ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း
benzodiazepine အဲဒီ receptor agonists
TES သည် Merck & Co၊ GlaxoSmithKline (GSK), Hoffmann-La Roche နှင့် Actelion တို့အတွက် orexin ရန်ဘက်များအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ CJW သည် Merck Sharp & Dohme ကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးစတော့ရှယ်ယာများကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးကုမ္ပဏီတွင်စတော့ရှယ်ယာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်များရှိသည်။
1 ။ Sakurai T က, Amemiya တစ်ဦးက, Ishii M က, Matsuzaki ငါ Chemelli RM, et al ။ Orexins နှင့် orexin receptors: hypothalamic neuropeptides နှင့်အပြုအမူအစာကျွေးထိန်းညှိကြောင်း, G ပရိုတိန်း-coupled receptors တစ်မိသားစု။ cell ။ 1998; 92: 573-85 ။ [PubMed]
2 ။ et al Lecea L ကို, Kilduff TS, Peyron ကို C, Gao X ကို, Foye PE, က de ။ အဆိုပါ hypocretins: neuroexcitatory လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ hypothalamus-တိကျတဲ့ peptides ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1998; 95: 322-27 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ Lee က JH, ဘန်အီး, Chae KJ, Kim က JY, Lee က DW အသစ်တစ်ခု hypothalamic neuropeptide ၏ Lee ကဒဗလျူဖြေရှင်းချက်ဖွဲ့စည်းပုံ, လူ့ hypocretin-2 / orexin-B က။ EUR J ကိုထဲကဓာတုပစ်စညျး။ 1999; 266: 831-39 ။ [PubMed]
4 ။ Espana RA, Baldo BA, ကယ်လီ AE, Berridge CW ။ မြှင့်တင်-နိုးနှင့် hypocretin (orexin) ၏အိပ်စက်ခြင်း-နှိပ်ကွပ်လုပ်ရပ်များ: လုပ်ဆောင်ချက် Basal forebrain ဆိုဒ်များ။ neuroscience ။ 2001; 106: 699-715 ။ [PubMed]
5 ။ Thannickal TC, Moore က RY, Nienhuis R ကို, Ramanathan L ကို, Gulyani S က, et al ။ လူ့ narcolepsy အတွက် hypocretin အာရုံခံအရေအတွက်လျှော့ချ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2000; 27: 469-74 ။ [PubMed]
6 ။ Fronczek R ကို, Lammers GJ, Balesar R ကို, Unmehopa UA, Swaab DF ။ hypothala-မိုက် hypocretin (orexin) အာရုံခံအရေအတွက် Prader-Willis syndrome ရောဂါအတွက်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2005; 90: 5466-70 ။ [PubMed]
7 ။ Peyron ကို C, Tighe DK, ဗန်တွင်း et al Pol AN, က de Lecea L ကို, Heller HC ။ မျိုးစုံအာရုံခံစနစ်များမှ hypocretin (orexin) စီမံကိန်းကို်အာရုံခံ။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18: 9996-10015 ။ [PubMed]
8 ။ Yoshida K ကို McCormack က S, Espana RA, Crocker တစ်ဦးက, Scammell TE ။ ကြွက်ဦးနှောက်၏ orexin အာရုံခံမှ Afferents ။ J ကို comp Neurol ။ 2006; 494: 845-61 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
9 ။ Sakurai T က, Nagata R ကို, Yamanaka တစ်ဦးက, Kawamura H ကို, Tsujino N ကို, et al ။ ကြွက်များတွင်မျိုးဗီဇကုဒ်သွင်း tracer အားဖြင့်ထင်ရှား orexin / hypocretin အာရုံခံ၏ input ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 46: 297-308 ။ [PubMed]
10 ။ Chou TC, Scammell TE, Gooley JJ, Gaus SE, Saper သမဝါယမ, အမူအကျင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian rhythms ၏ကျယ်ပြန့အတွက် dorsomedial hypothalamic နျူကလိယ၏ Lu ကဂျေဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 10691-702 ။ [PubMed]
11 ။ Bonnet MH, Arand DL ။ အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်ပုံမှန်ပာအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Psychosom Med ။ 1998; 60: 610-15 ။ [PubMed]
12 ။ Bonnet MH, Arand DL ။ အိပ်မပျော်, ဇီဝဖြစ်စဉ်မှုနှုန်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းပွနျလညျထူထောငျ။ J ကို International Med ။ 2003; 254: 23-31 ။ [PubMed]
13 ။ Holmqvist T က, Akerman KEO, Kukkonen JP ။ neuropeptide Y ကိုများနှင့်အခြား neuropeptides ကျော် orexins လူ့ orexin receptors မြင့်မားသတ်မှတ်ချက်။ neuroscience လက်တ။ 2001; 305: 177-80 ။ [PubMed]
14 ။ Marcus ဖြစ်မှု, Aschkenasi CJ, Lee ကအီး, Chemelli RM, Saper သမဝါယမ, et al ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin receptors 1 နှင့်2၏ differential စကားရပ်။ J ကို comp Neurol ။ 2001; 435: 6-25 ။ [PubMed]
15 ။ Johren အို Neidert SJ, Kummer M က, Dendorfer တစ်ဦးက, Dominiak P. Prepro-orexin နှင့် orexin အဲဒီ receptor mRNAs differential ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များ၏အရံတစ်ရှူးများတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2001; 142: 3324-31 ။ [PubMed]
16 ။ Randeva HS, Karteris အီး, Grammatopoulos: D, Hillhouse EW ။ orexin-A နှင့်လူ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ adrenals အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ orexin အမျိုးအစား2receptors ၏ expression: adrenal function ကိုနှင့်စွမ်းအင် homeostasis များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2001; 86: 4808-13 ။ [PubMed]
17 ။ Kirchgessner AL, အအူထဲမှာလျူအမ် Orexin ပေါင်းစပ်နှင့်တုန့်ပြန်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1999; 24: 941-51 ။ [PubMed]
18 ။ Baumann CR, Clark က EL, Pedersen NP, Hecht JL, Scammell TE ။ Enter အာရုံခံ hypocretin စေပါသလား စည်းမျဉ်း Pept ။ 2008; 147: 1-3 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ Hagan JJ, Leslie RA, Patel က S နဲ့, အီဗန် ML, Wattam က TA, et al ။ Orexin တစ်ဦးက locus coeruleus ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင် arousal တိုးပွားစေပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1999; 96: 10911-16 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20 ။ Bourgin P ကို, Huitron-Resendiz et al S က, Spier အေဒီ, Fabre V ကို, Morte B က။ Hypocretin-1 locus coeruleus အာရုံခံ၏ activation မှတစ်ဆင့်လျင်မြန်စွာမျက်စိလှုပ်ရှားမှုအိပ်ပျော်ခြင်း modulates ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 7760-65 ။ [PubMed]
21 ။ လျူ RJ, ဗန်တွင်း Pol AN, Aghajanian GK ။ Hypocretins (orexins) excitatory တိုက်ရိုက်နှင့် inhibitory သွယ်ဝိုက်လုပ်ရပ်များအားဖြင့် dorsal raphe နျူကလိယအတွက် serotonin အာရုံခံထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 9453-64 ။ [PubMed]
22 ။ Arrigoni အီး, Mochizuki T က, Scammell TE ။ အဆိုပါ orexin / hypocretin အာရုံခံအားဖြင့် Basal forebrain ၏ activation ။ Acta Physiol ။ 2010; 198: 223-35 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ Karteris အီး, Randeva HS, Grammatopoulos DK, Jaffe RB, Hillhouse EW ။ လူ့သန္ဓေသား adrenals အတွက် CRH နှင့် orexin အမျိုးအစား2receptors ၏ expression နဲ့နားချင်းဆက်မှီဝိသေသလက္ခဏာများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2001; 86: 4512-19 ။ [PubMed]
24 ။ Hoang QV, Bajic: D, Yanagisawa က M, Nakajima က S, orexin ၏ Nakajima Y. အကျိုးသက်ရောက်မှု (hypocretin) GIRK လိုင်းများပေါ်မှာ။ J ကို Neurophysiol ။ 2003; 90: 693-702 ။ [PubMed]
25 ။ ဗန်တွင်း Pol AN, Gao xB, Obrietan K ကို Kilduff TS, Belousov AB ။ Presynaptic နှင့် postsynaptic လုပ်ရပ်များအသစ်တစ်ခု hypothalamic peptide, hypocretin / orexin အားဖြင့် neuroendocrine အာရုံခံ၏မော်ဂျူ။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18: 7962-71 ။ [PubMed]
26 ။ Kohlmeier Ka, Inoue T က, Leonard CS ။ Hypocretin / ပုတက် arousal စနစ်ပြ orexin peptide: မောက် dorsal raphe နှင့် laterodorsal tegmentum အတွက် intracellular ကယ်လစီယမ်၏မြင့်။ J ကို Neurophysiol ။ 2004; 92: 221-35 ။ [PubMed]
27 ။ Peltonen HM, Magga JM, Bart, G, Turunen pm တွင်, Antikainen က MS, et al ။ နွားကိုကကမကထပြုခဲ့ကယ်လစီယမ်လှိုအတွက် TRPC3 လိုင်းများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု1 orexin receptors ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community ။ 2009; 385: 408-12 ။ [PubMed]
28 ။ Burdakov: D, Liss B, Ashcroft FM ရေ။ Orexin ဟာဆိုဒီယမ်-ကယ်လစီယမ် exchanger ကိုသက်ဝင်အားဖြင့် arcuate နျူကလိယ၏ GABAergic အာရုံခံ excites ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 4951-57 ။ [PubMed]
29 ။ Acuna-Goycolea ကို C, ဗန်တွင်း Pol AN ။ Neuroendocrine proopiomelanocortin အာရုံခံ hypocretin / orexin အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 1503-13 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ Borgland SL, Taha လုပ် SA, Sarti က F, Fields HL, အ VTA အတွက် Bonci အေ Orexin တစ်ဦးကင်းမှ Synaptic plasticity နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကဲဆတ်ခြင်း induction ဘို့အရေးကြီးသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 49: 589-601 ။ [PubMed]
31 ။ Borgland SL, မုန်တိုင်း, E, Bonci အေ Orexin B / hypocretin2ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron မှ glutamatergic ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 1545-56 ။ [PubMed]
32 ။ Chou TC, Lee ကအီး, Lu က J ကို, Elmquist JK, Hara J ကို, et al ။ Orexin (hypocretin) အာရုံခံ dynorphin ဆံ့။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: RC168 ။ [PubMed]
33 ။ Crocker တစ်ဦးက, et al Espana RA, Papadopoulou M က, Saper သမဝါယမ, Faraco J ကို။ narcolepsy အတွက် dynorphin, NARP နှင့် orexin ၏ Concomitant အရှုံး။ အာရုံကြော။ 2005; 65: 1184-88 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ Eriksson KS, Sergeeva oa, Selbach အို Haas HL ။ Orexin (hypocretin) / dynorphin အာရုံခံအာရုံခံ tuberomammillary မှ GABAergic သွင်းအားစုကိုထိန်းချုပ်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004; 19: 1278-84 ။ [PubMed]
35 ။ Hara J ကို, Yanagisawa က M, orexin-နောက်ကောက်ကြွက်နှင့်အတူတူပင်မျိုးဗီဇနောက်ခံနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့်အတူ orexin အာရုံခံဆဲလျ-လစ်လပ်ကြွက်အကြားအဝလွန် phenotype အတွက် Sakurai တီ Difference ။ neuroscience လက်တ။ 2005; 380: 239-42 ။ [PubMed]
36 ။ Kantor က S, Mochizuki T က, Janisiewicz လေး, Clark ကအီး, Nishino က S, Scammell TE ။ Orexin အာရုံခံ REM အိပ်စက်ခြင်း၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ အိပ်သင့်ပါတယ်။ 2009; 32: 1127-34 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 ။ Piper, DC, Upton N ကို, Smith က MI, Hunter AJ ။ အဆိုပါဝတ္ထုဦးနှောက် neuropeptide, orexin-A, ကြွက်များ၏အိပ်ပျော်ခြင်း-ပါတီအားသံသရာ modulates ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2000; 12: 726-30 ။ [PubMed]
38 ။ Kohlmeier Ka, က Watanabe က S, Tyler CJ, Burlet S က, Leonard CS ။ dorsal raphe နှင့် laterodorsal tegmentum အာရုံခံအပေါ် dual orexin လုပ်ရပ်များ: ဆူညံစုံလုံလက်ရှိ activation နှင့် Ca ၏ရွေးချယ်တိုးမြှင့်2+ L-type ကိုကယ်လစီယမ်လိုင်းများကကမကထပြုခဲ့ယာယီ။ J ကို Neurophysiol ။ 2008; 100: 2265-81 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ Bayer, L, Serafin M က, Eggermann အီး, et al Saint-Mleux B, Machard: D ။ Sub Layer ကို 6b cortical အာရုံခံအပေါ် hypocretin-orexin ၏သီးသန့် postsynaptic အရေးယူ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 6760-64 ။ [PubMed]
40 ။ Eriksson KS, Sergeeva အိုဘရောင်း RE, Haas HL ။ Orexin / hypocretin အဆိုပါ tuberomammillary နျူကလိယ၏ histaminergic အာရုံခံ excites ။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 9273-79 ။ [PubMed]
41 ။ Estabrooke IV, ဆက်မက်ကာသီ MT, Ko အီး, Chou TC, Chemelli RM, et al ။ orexin အာရုံခံအတွက် Fos စကားရပ်အပြုအမူပြည်နယ်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 1656-62 ။ [PubMed]
42 ။ Lee က MG, ဟက်စ OK ကို, ဂျုံးစ် BE ။ အဆိုပါအိပ်ပျော်ခြင်း-နှိုးသံသရာတစ်လျှောက်ဖော်ထုတ် orexin / hypocretin အာရုံခံ၏ discharge ။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 6716-20 ။ [PubMed]
43 ။ Mileykovskiy BY, Kiyashchenko LI, Siegel JM ။ ဖော်ထုတ် hypocretin / orexin အာရုံခံအတွက်လှုပ်ရှားမှု၏အမူအကျင့် Correlate ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 46: 787-98 ။ [PubMed]
44 ။ et al Yoshida Y ကို, Fujiki N ကို, Nakajima T က, Ripley B, Matsumura H ။ အလင်းကို-မှောင်မိုက်သံသရာနှင့်အိပ်စက်ခြင်း-ပါတီအားလှုပ်ရှားမှုများ ဆက်စပ်. အတွက်ကြွက်များတွင် extracellular hypocretin-1 (orexin A) ကိုအဆင့်ဆင့်၏အတက်အကျ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2001; 14: 1075-81 ။ [PubMed]
45 ။ Zeitzer JM, Buckmaster CL, က Parker KJ, Hauck CM, လီယွန် DM, Mignot အီးခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian နှင့်မျောက်မော်ဒယ်အတွက် hypocretin ၏နေအိမ်-ostatic စည်းမျဉ်း: နိုးနိုးကွားကွား၏စုစည်းဘို့ဂယက်ရိုက်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 3555-60 ။ [PubMed]
46 ။ Grady SP, Nishino က S, Czeisler, CA, Hepner: D, Scammell TE ။ ကျန်းမာအထီးဘာသာရပ်များအတွက် CSF orexin-တစ်ဦးအတွက် Diurnal မူကွဲ။ အိပ်သင့်ပါတယ်။ 2006; 29: 295-97 ။ [PubMed]
47 ။ ဆော်လမွန် RM, Ripley B, et al ကနေဒီ JS, ဂျွန်ဆင် B, Schmidt က: D ။ ထိန်းချုပ် cere-brospinal အရည် hypocretin-1 (Orexin-A) ကိုအဆင့်ဆင့်နှင့်စိတ်ဓာတ်ဘာသာရပ်များ၏ Diurnal မူကွဲ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 54: 96-104 ။ [PubMed]
48 ။ Peyron ကို C, Faraco J ကို, ရော်ဂျာ W က, Ripley B, Overeem S က, et al ။ အစောပိုင်းစတင်ခြင်း narcolepsy နှင့်လူ့ narcoleptic ဦးနှောက်ထဲမှာ hypocretin peptides တစ် generalized မရှိခြင်း၏အမှု၌တစ်ဦးက mutation ။ နတ် Med ။ 2000; 6: 991-97 ။ [PubMed]
49 ။ Mignot အီး, Lammers GJ, Ripley B, Okun M က, Nevsimalova S က, et al ။ narcolepsy နှင့်အခြား hypersomnias ၏ရောဂါအတွက် cerebrospinal fluid hypocretin တိုင်းတာခြင်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Arch Neurol ။ 2002; 59: 1553-62 ။ [PubMed]
50 ။ Chemelli RM, ဝီလီ JT, Sinton CM, Elmquist JK, Scammell T က, et al ။ orexin နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာ Narcolepsy: အိပ်စက်ခြင်းစည်းမျဉ်း၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ။ cell ။ 1999; 98: 437-51 ။ [PubMed]
51 ။ Mochizuki T က, Crocker တစ်ဦးက, McCormack က S, Yanagisawa က M, Sakurai T က, Scammell TE ။ orexin ခေါက်ထွက်ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 6291-300 ။ [PubMed]
52 ။ Diniz Behn CG, Klerman eb, Mochizuki T က, Lin က SC, Scammell TE ။ orexin နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာပုံမှန်မဟုတ်သောအိပ်ပျော်ခြင်း / ပါတီအားဒိုင်းနမစ်။ အိပ်သင့်ပါတယ်။ 2010; 33: 297-306 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 ။ Beuckmann မှန် CT, Sinton CM, Williams က SC, ရစ်ချတ်ဆန်ဂျာ Hammer RE, et al ။ orexin အာရုံခံအတွက် Poly-glutamine-ataxin-3 Transgene ၏ expression ကြွက်များတွင် narcolepsy-cataplexy ဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 4469-77 ။ [PubMed]
54 ။ Lin က L ကို, Faraco J ကိုလီ R ကို, Kadotani H ကို, ရော်ဂျာ W က, et al ။ အဆိုပါအိပ်စက်ခြင်းရောဂါခွေးတစ်ကောင် narcolepsy ထဲမှာတစ်ဦး mutation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် hypocretin (orexin) အဲဒီ receptor2မျိုးဗီဇ။ cell ။ 1999; 98: 365-76 ။ [PubMed]
55 ။ Gudewill အက်စ်ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်း။ Ludwig-Maximilian Univ; မြူးနစ်: 1992 ။ der Zusammenhang zwischen Schlaf-Wach-Verhalten und Hormonsekretion Bei Narkolep-siepatienten ။
56 ။ Dantz နျခကျြ, Edgar DM, Dement WC ။ narcolepsy အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian rhythms: တစ် 90 မိနစ်နေ့၌လေ့လာမှုများ။ Electroencephalogr Clin Neurophysiol ။ 1994; 90: 24-35 ။ [PubMed]
57 ။ Vetrugno R ကို, D'အန်ဂျလို R ကို, Moghadam KK, Vandi S က, Franceschini ကို C, et al ။ လူ့ cataplexy ၏အမူအကျင့်များနှင့် neuro-ဇီဝကမ္မဆက်စပ်မှု: တစ်ဗီဒီယိုအမှန်ပြောစစ်ဆေးခြင်းလေ့လာမှု။ Clin Neurophysiol ။ 2010; 121: 153-62 ။ [PubMed]
58 ။ Thannickal TC, Nienhuis R ကို, Siegel JM ။ cataplexy မပါဘဲ narcolepsy အတွက် hypocretin ဒေသခံဆုံးရှုံးမှု (orexin) ဆဲလ်။ အိပ်သင့်ပါတယ်။ 2009; 32: 993-98 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
59 ။ Kisanuki YY, Chemelli RM, Sinton CM, ဝီလျံက S, ရစ်ချတ်ဆန်ဂျေ, et al ။ အိပ်စက်ခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် orexin အဲဒီ receptor အမျိုးအစား-1 (OX1R) ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အိပျပျြော 2000, 14th Annu မှာပေးအပ်သည်။ တွေ့ဆုံ။ Assoc ။ ပါမောက္ခအိပ်စက်ခြင်း Soc; ဇွန်လ 17-22; Las Vegas မှ, Nev ။ 2000 ။
60 ။ ဝီလီ JT, Chemelli RM, Sinton CM, Tokita S က, Williams က SC, et al ။ ကွဲပြား narcolepsy syndrome အတွက် orexin အဲဒီ receptor-2 နှင့် orexin တရားမဝင်သောကြွက်: Non-REM နှင့် REM sleep ကိုစည်းမျဉ်းဖြစ်စဉ်များ၏မော်လီကျူးဗီဇခှဲစိတျ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 38: 715-30 ။ [PubMed]
61 ။ Hondo က M, နာဂအိ K သည်, Ohno သည် K ကို Kisanuki Y ကို, ဝီလီ JT, et al ။ Histamine-1 အဲဒီ receptor Basal အိပ်ပျော်ခြင်း / ပါတီအားပြည်နယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် orexin-2 အဲဒီ receptor ၏မြစ်အောက်ပိုင်း effector အဖြစ်မလိုအပ်ပါ။ Acta Physiol ။ 2010; 198: 287-94 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62 ။ Edwards က CMB, Abusnana S က, Sunter: D, မာဖီကီလိုဂရမ်, Ghatei MA, Bloom SR ။ အစားအသောက်စားသုံးမှုအပေါ် orexins ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: neuropeptide Y ကို, melanin-အာရုံဟော်မုန်းနှင့် galanin နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ J ကို Endocrinol ။ 1999; 160: R7-12 ။ [PubMed]
63 ။ Espana RA, Plahn S က, Berridge CW ။ hypocretin / orexin ၏မှီခို-ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian-လွတ်လပ်သောအပြုအမူလုပ်ရပ်များ။ ဦးနှောက် Res ။ 2002; 943: 224-36 ။ [PubMed]
64 ။ ဂျွန်စ LE, Fong သည် TM, ကြွက်များတွင်အစာကျွေးနေစဉ် hypothalamus နှင့် brainstem အတွက် Leng G. အအာရုံခံ activation ။ cell Metab ။ 2006; 4: 313-21 ။ [PubMed]
65 ။ Moriguchi T က, Sakurai T က, Nambu T က, Yanagisawa က M, Goto K. အာရုံခံအရွယ်ရောက်သူကြွက်ဦးနှောက်၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ၌ orexin ်အင်ဆူလင်ကုထုံးတွေစူးရှသော hypoglycemia အားဖြင့် activated နေကြသည်။ neuroscience လက်တ။ 1999; 264: 101-4 ။ [PubMed]
66 ။ Yamanaka တစ်ဦးက, Beuckmann မှန် CT, ဝီလီ JT, Hara J ကို, Tsujino N ကို, et al ။ Hypothalamic orexin အာရုံခံကြွက်များတွင်စွမ်းအင်ဟန်ချက်အညီ arousal ထိန်းညှိ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 38: 701-13 ။ [PubMed]
67 ။ ဂလူးကို့စအတွက် Burdakov: D, Gerasimenko အို Verkhratsky အေဇီဝအပြောင်းအလဲများကို differential situ အတွက် hypothalamic melanin-အာရုံဟော်မုန်းနှင့် orexin အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် modulate ။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 2429-33 ။ [PubMed]
68 ။ Harris က GC, Wimmer M က, ဆုလာဘ်ရှာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံအဘို့အ Aston-Jones ဟာဂျီတစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 2005; 437: 556-59 ။ [PubMed]
69 ။ နာရီတာ M က, Nagumo Y ကို, Hashimoto က S, နာရီတာ M က, Khotib J ကို, et al ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ activation အတွက် orexin-ergic စနစ်များတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 398-405 ။ [PubMed]
70 ။ JW, Dominguez JM, Sato သည် SM, Shen RY, Hull က EM Muschamp ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် hypocretin တစ်အခန်းကဏ္ဍ (orexin) ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 2837-45 ။ [PubMed]
71 ။ Quarta: D, Valerio အီး, Hutcheson DM, Hedou, G, Heidbreder C. အဆိုပါ orexin-1 အဲဒီ receptor ရန် SB-334867 နျူကလီးယပ် accumbens ၏ shell ကိုအတွက်စိတ်ကြွဆေး-evoked dopamine ထွက်သွားလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးလျော့နည်းစေပါသည်။ Neurochem Int ။ 2010; 56: 11-15 ။ [PubMed]
72 ။ Berridge CW, Espana RA, Vittoz မိုင်။ arousal နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအတွက် Hypocretin / orexin ။ ဦးနှောက် Res ။ 2010; 1314: 91-102 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
73 ။ et al Winsky-Sommerer R ကို, Yamanaka တစ်ဦးက, Diano S က, Borok အီး, Roberts သည် AJ ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေတဲ့ဝတ္ထု circuit ကို: အ corticotropin-releasing အချက်စနစ်နှင့် hypocretins (orexins) အကြားအပြန်အလှန်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 11439-48 ။ [PubMed]
74 ။ et al Kayaba Y ကို, Nakamura တစ်ဦးက, Kasuya Y ကို, Ohuchi T က, Yanagisawa က M ။ ကာကွယ်ရေးတုံ့ပြန်မှုများနှင့် orexin နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာအနိမ့် Basal သွေးဖိအား Attenuated ။ Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း J ကို Physiol ဖြစ်၏။ 2003; 285: R581-93 ။ [PubMed]
75 ။ ဖာလုံ TM, Vianna DML, လျူ L ကို, Carrive P. Hypocretin / orexin တချို့၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် arousal မပုံစံအားလုံးကိုစတေယျ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2009; 30: 1603-14 ။ [PubMed]
76 ။ et al ဗန်တွင်းထိပ်တန်း M က, Nolan MF, Lee က K ကိုရစ်ချတ်ဆန် PJ, Buijs RM ။ Orexins တိုးချဲ့စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ကြွက်စာနာ preganglionic အာရုံခံ၏ထပ်တူသွေးဆောင်။ J ကို Physiol ။ 2003; 549: 809-21 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
77 ။ Smith က BN, Davis က SF, ဗန်တွင်း Pol AN, hypocretin2အားဖြင့်ကြွက်နျူကလိယ Tractus solitarius အတွက် excitatory Synaptic လှုပ်ရှားမှု Xu ဒဗလျူရွေးချယ်တိုးမြှင့်။ neuroscience ။ 2002; 115: 707-14 ။ [PubMed]
78 ။ Shirasaka T က, Nakazato M က, Matsukura S က, Takasaki M က, သတိကြွက်များတွင် orexins ၏ Kannan အိပ်ချ်စာနာခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာလုပ်ရပ်တွေကို။ Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း J ကို Physiol ဖြစ်၏။ 1999; 277: R1780-85 ။ [PubMed]
79 ။ Zhang က S နဲ့, Zeitzer JM, Sakurai T က, Nishino က S, Mignot အီးအိပ်စက်ခြင်း / ပါတီအားအကွဲကွဲအပြားပြား narcolepsy တစ်ဦး mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက်ဇီဝြဖစ် disrupts ။ J ကို Physiol ။ 2007; 581: 649-63 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
80 ။ Hara J ကို, Beuckmann မှန် CT, Nambu T က, ဝီလီ JT, Chemelli RM, et al ။ ကြွက်တွေမှာ orexin အာရုံခံ၏မျိုးဗီဇ ablation narcolepsy, hypophagia နှင့်အဝလွန်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2001; 30: 345-54 ။ [PubMed]
81 ။ Schuld တစ်ဦးက, Hebebrand J ကို, Geller က F, Pollmacher တီ narcolepsy နှင့်အတူလူနာအတွက်ခန္ဓာကိုယ်-အစုလိုက်အပြုံလိုက်အညွှန်းကိန်းများတိုး။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2000; 355: 1274-75 ။ [PubMed]
82 ။ Lammers GJ, Pijl H ကို, Iestra J ကို, Langius ဂျာ Buunk, G, Meinders AE ။ narcolepsy အတွက်သဘောဆောင်သောအစားအစာရွေးချယ်မှု။ အိပ်သင့်ပါတယ်။ 1996; 19: 75-76 ။ [PubMed]
83 ။ Espana RA, McCormack SL, Mochizuki T က, Scammell TE ။ ပြေးနိုးနိုးကွားကွားအားပေးအားမြှောက်နဲ့ orexin နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာ cataplexy တိုးပွားစေပါသည်။ အိပ်သင့်ပါတယ်။ 2007; 30: 1417-25 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
84 ။ Ohayon MM ။ အိပ်မပျော်၏ကူးစက်ရောဂါ: အဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့သိနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့နေဆဲလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်စက်ခြင်း Med ဗျာ 2002; 6: 97-111 ။ [PubMed]
85 ။ ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ။ လူကြီးများအတွက်နာတာရှည်အိပ်မပျော်၏သရုပ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်သိပ္ပံညီလာခံထုတ်ပြန်ချက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြည်နယ်အမျိုးသား Institutes, ဇွန်လ 13-15, 2005 ။ အိပ်သင့်ပါတယ်။ 2005; 28: 1049-57 ။ [PubMed]
86 ။ Katz DA, McHorney CA. နာတာရှည်နာမကျန်းနှင့်အတူလူနာအတွက်အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်အသက်တာ၏ကျန်းမာရေး-related အရည်အသွေးကိုအကြားဆက်ဆံရေး။ J ကို Fam Pract ။ 2002; 51: 229-35 ။ [PubMed]
87 ။ Weissman MM, Greenwald က S, Nino-Murcia, G, Dement WC ။ စိတ်ရောဂါမမှန်ခြင်းဖြင့် uncomplicated အိပ်မပျော်၏ရောဂါ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hosp စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997; 19: 245-50 ။ [PubMed]
88 ။ Chang PP, Ford ကား DE, Mead LA က, Cooper က-ပက်ထရစ် L ကို, Klag MJ ။ လုလင်တို့သည်နှင့်နောက်ဆက်တွဲစိတ်ကျရောဂါအတွက်အိပ်မပျော်: အကို Johns Hopkins ရှေ့ပြေးလေ့လာပါ။ နံနက် J ကို Epidemiol ။ 1997; 146: 105-14 ။ [PubMed]
89 ။ Walsh JK, Engelhardt CL ။ 1995 များအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အိပ်မပျော်များ၏တိုက်ရိုက်စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်။ အိပ်သင့်ပါတယ်။ 1999; 22 (ပျော့ပျောင်း 2): S386-93 ။ [PubMed]
90 ။ Perlis M က, စမစ်က M, ခိုဒဗလျူ Etiology နှင့်အိပ်မပျော်၏ pathophysiology ။ ခုနှစ်တွင်: Kryger MH, Roth T က, Dement WC, အယ်ဒီတာများ။ အခြေခံမူများနှင့်အိပ်စက်ခြင်းဆေးပညာ၏အလေ့အကျင့်။ Philadelphia တွင်: Elsevier; 2005 ။ စစ။ 714-25 ။
91 ။ Morin C. စိတ်ဓာတ်နှင့်မူလတန်းအိပ်မပျော်များအတွက်အမူအကျင့်ကုသမှု။ ခုနှစ်တွင်: Kryger MH, Roth T က, Dement WC, အယ်ဒီတာများ။ အခြေခံမူများနှင့်အိပ်စက်ခြင်းဆေးပညာ၏အလေ့အကျင့်။ Philadelphia တွင်: Elsevier; 2005 ။ စစ။ 726-37 ။
92 ။ Krystal အေဒီ, Walsh JK, Laska အီး, caron J ကို, Amato DA, et al ။ ညစဉ်ညတိုင်းကုသမှု6လအတွင်း eszopiclone ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ထိရောက်မှု: နာတာရှည်အိပ်မပျော်နှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးကိုကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ အိပ်သင့်ပါတယ်။ 2003; 26: 793-99 ။ [PubMed]
93 ။ Krystal အေဒီ, Erman M က, Zammit GK, Soubrane ကို C, နာတာရှည်မူလတန်းအိပ်မပျော်နှင့်အတူလူနာအတွက် 12.5 ပတ်တစ်ပတ်လျှင်3ညမှ7အုပ်ချုပ် zolpidem တိုးချဲ့-လွှတ်ပေးရန် 24 မီလီဂရမ်၏ Roth တီ long-term ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှု: တစ် 6- တစ်လ Random, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled, အပြိုင်-အုပ်စုပေါင်းစုံပါလေ့လာမှု။ အိပ်သင့်ပါတယ်။ 2008; 31: 79-90 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
94 ။ Walsh J ကို, Erman M က, Erwin CW, Jamieson တစ်ဦးက, Mahowald M က, et al ။ DSMIII-R ကိုမူလတန်းအိပ်မပျော်အတွက် trazodone နှင့် zolpidem ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ညှို့ထိရောက်မှု။ လူ့ Psychopharmacol Clin Exp ။ 1998; 13: 191-98 ။
95 ။ Zammit, G, Erman M က, ဝမ်-Weigand S က, Sainati S က, Zhang က J ကို, နာတာရှည်အိပ်မပျော်နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် ramelteon ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှု၏ Roth တီအကဲဖြတ်။ J ကို Clin အိပ်စက်ခြင်း Med ။ 2007; 3: 495-504 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
96 ။ ray WA, Thapa PB, ဂိဒေါင် P. Benzodiazepines နှင့်ဘိုးဘွားရိပ်သာနေထိုင်သူများအတွက်ရေတံခွန်၏အန္တရာယ်။ J ကို Am သက်ကြီးရွယ်အိုများ Soc ။ 2000; 48: 682-85 ။ [PubMed]
97 ။ Thapa PB, ဂိဒေါင် P ကို, TW, Milam AB, Ray WA ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ စိတ်မကျဆေး Antidepressants နှင့်ဘိုးဘွားရိပ်သာနေထိုင်သူများအကြားရေတံခွန်၏အန္တရာယ်။ N ကို Engl J ကို Med ။ 1998; 339: 875-82 ။ [PubMed]
98 ။ Busto ဦး, ရောင်းအား EM, Naranjo, CA, Cappell HD ကို, Sanchez-Craig M က, benzodiazepine အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုများ၏ Simpkins ဂျေပုံစံများ။ br J ကိုစွဲလမ်း။ 2006; 81: 87-94 ။ [PubMed]
99 ။ Tan က KR, et al ဘရောင်းက M, Labouebe, G, Yvon ကို C, Creton ကို C ။ benzodiazepines ၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများဘို့အာရုံကြောအခြေစိုက်စခန်း။ သဘာဝ။ 2010; 463: 769-74 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
100 ။ Espana RA, Oleson eb, ဂျွန်လော့ခ် JL, Brookshire BR, ရောဘတ်, DC, ဂျုံးစ် SR ။ အဆိုပါ hypocretin-orexin စနစ် mesolimbic dopamine system ပေါ်တွင်လုပ်ရပ်များကနေတဆင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးထိန်းညှိ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2010; 31: 336-48 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
101 ။ လောရင့် AJ, Cowen က MS, ယန် HJ, ချန်က F, Oldfield ခအဆိုပါ orexin system ကိုကြွက်များတွင်အရက်-ရှာကြံထိန်းညှိ။ br J ကို Pharmacol ။ 2006; 148: 752-59 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
102 ။ Holland ဂျာလူးမေး, ကင်မရွန် MD, Kamenecka TM, Kenny PJ ။ နောက်ကျနေခဲ့သည် hypocretin ဂီယာနီကိုတင်းဆုလာဘ်ထိန်းညှိ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2008; 105: 19480-85 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
103 ။ သူဌေးကကို C, Brisbare-Roche က C, neuroscience အတွက် orexin / hypocretin အဲဒီ receptor ligands ၏ Jenck အက်ဖ်ဇီဝဆေးပညာလျှောက်လွှာ။ J ကို Med Chem ။ 2009; 52: 891-903 ။ [PubMed]
104 ။ Roecker AJ, Coleman PJ ။ Orexin အဲဒီ receptor ရန်: ဆေးဖက်ဝင်ဓာတုဗေဒနှင့်ကုထုံးအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ Curr ထိပ်တန်း Med Chem ။ 2008; 8: 977-87 ။ [PubMed]
105 ။ Coleman PJ, Renger JJ ။ Orexin အဲဒီ receptor ရန်: 2006 ကတည်းကမူပိုင်ခွင့်အလားအလာဒြပ်ပေါင်းများပြန်လည်သုံးသပ်။ ကျွမ်းကျင်သူ Opin Ther Pat ။ 2010; 20: 307-24 ။ [PubMed]
106 ။ Cai J ကို, ချက်ပြုတ် FE, Sherborne BS ။ အဆိုပါ orexin အဲဒီ receptor ၏ရန်။ ကျွမ်းကျင်သူ Opin Ther Pat ။ 2006; 16: 631-46 ။
107 ။ et al Brisbare-Roche က C, Dingemanse J ကို, Koberstein R ကို, Hoever P ကို, Aissaoui H ကို။ ကြွက်, ခွေးနှင့်လူသားအတွက် orexin system ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်အိပ်ပျော်ရာမြှင့်တင်ရေး။ နတ် Med ။ 2007; 13: 150-55 ။ [PubMed]
107 ။ Herring WJ, Budd KS, Hutzelmann J ကို, Snyder အီး, Snavely: D, et al ။ မူလတန်းအိပ်မပျော်နှင့်အတူလူနာအတွက် dual-orexin အဲဒီ receptor ရန် MK-4305 ၏ထိရောက်မှုနှင့်သည်းခံစိတ်: Random, ထိန်းချုပ်ထား, သပ္ပါယ် crossover polysomnography လေ့လာမှု။ အိပျပျြော 2010, 24th Annu မှာပေးအပ်သည်။ တွေ့ဆုံ။ Assoc ။ ပါမောက္ခအိပ်စက်ခြင်း Soc; ဇွန်လ 5-9; San Antonio တွင်, Tex ။ 2010 ။
108 ။ စမတ်: D, Sabido-သည်ဒါဝိဒ်ကို C, et al Brough SJ, Jewitt က F, Johns တစ်ဦး။ SB-334867-တစ်ဦးက: ပထမဦးဆုံးရွေးချယ် orexin-1 အဲဒီ receptor ရန်။ br J ကို Pharmacol ။ 2001; 132: 1179-82 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
109 ။ အထမ်းသမား RA, ချမ်း WN, Coulton S ကို Johns တစ်ဦးက, Hadley က MS, et al ။ 1,3-Biarylureas အဆိုပါ orexin-1 အဲဒီ receptor ၏ရွေးချယ် Non-peptide ရန်အဖြစ်။ Bioorg Med Chem လက်တ။ 2001; 11: 1907-10 ။ [PubMed]
110 ။ ရော့ဂျာ RJ, Halford JCG, Nunes က de Souza RL, Canto က de Souza AL, Piper, DC, et al ။ SB-334867 တစ်ဦးရွေးချယ် orexin-1 အဲဒီ receptor ရန်, အမူအကျင့်မွတ်မပြေနိုင်သောနှင့်လုပ်ကွက်ကြွက်များတွင် orexin-တစ်ဦး၏ hyperphagic အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2001; 13: 1444-52 ။ [PubMed]
111 ။ Langmead CJ, Jerman JC, Brough SJ, Scott, C, Porter RA, Herdon HJ ။ ၏စည်းနှောင်၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ [3H ကို] လူ့ orexin-674042 အဲဒီ receptor မှ -SB-1 တစ်ဝတ္ထု nonpeptide ရန်။ br J ကို Pharmacol ။ 2004; 141: 340-46 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
112 ။ Dugovic ကို C, Shelton je, Aluisio LE, Fraser IC, Jiang မှာ X, et al ။ orexin-1 receptors ၏ပိတ်ဆို့ကြွက်များတွင် orexin-2 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း-သွေးဆောင်အိပ်ပျော်ခြင်းမြှင့်တင်ရေး attenuates ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2009; 330: 142-51 ။ [PubMed]
113 ။ di Fabio R ကို, ဂျရတ် P ကို, et al ပေါ်တာ R ကို, Stemp, G, Nash: D ။ အတွက်စသည်တို့အဖြစ်နှင့် Vivo အစွမ်းထက် dual-orexin အဲဒီ receptor ရန်အတွက် bis-amido piperidine အနကျအဓိပ်ပါယျ။ 238th ACS Natl မှာပေးအပ်သည်။ Mee; သြဂုတ်လ 16-20; ဝါရှင်တန်ဒီစီ 2009 ။
114 ။ Ratti အီးစိတ်ရောဂါကုသမှု: ဆန်းသစ်တဲ့မူးယစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပိုက်လိုင်း။ 2007 ။ http://www.gsk.com/investors/presentations/2007/neurosciences-seminar-dec07/emiliangelo-ratti.pdf.
115 ။ Malherbe P ကို, Borroni အီး, Pinard အီး, Wettstein JG, Knoflach အက်ဖ်ထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့ almorexant ၏ electrophysiological စရိုက်လက္ခဏာတွေ, တစ်ဦးကို dual orexin 1 အဲဒီ receptor (နွားကို1 ) / orexin2အဲဒီ receptor (နွားကို2 ) ရန်: ရွေးချယ်သည်နွားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်1 နှင့်နွားကို2 ရန်။ Mol Pharmacol ။ 2009; 76: 618-31 ။ [PubMed]
116 ။ Brisbare-Roche က C, Clozel M က, ကြွက်များနှင့်ခွေးအတွက် orexin အဲဒီ receptor ရန် almorexant ၏အထပ်ထပ်ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေး Jenck အက်ဖ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အိပျပျြော 2008, 22nd Annu မှာပေးအပ်သည်။ တွေ့ဆုံ။ Assoc ။ ပါမောက္ခအိပ်စက်ခြင်း Soc; ဇွန်လ 7-12; Baltimore, Md ။ 2008 ။
117 ။ Morairty S က, et al ဗျာဒိတ်ကျမ်းက F, Moreau J ကို, Silveira K ကို Malherbe P ကို။ အဆိုပါ hypocretin / orexin ရန် almorexant ၏နောက်ထပ်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 2009, Annu မှာပေးအပ်သည်။ တွေ့ဆုံ။ Soc ။ neuroscience; အောက်တိုဘာ 17-21; ချီကာဂို။ 2009 ။
118 ။ ကော့ CD ကို, McGaughey GB ကို, Bogusky MJ, Whitman DB, Ball ကို RG, et al ။ ၏ညီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ N ကို, N ကို-disubstituted-1,4-diazepane orexin အဲဒီ receptor ရန်နှင့်သက်ရောက်မှုတွေအဲဒီ receptor binding သည်။ Bioorg Med Chem လက်တ။ 2009; 19: 2997-3001 ။ [PubMed]
119 ။ Coleman PJ, Schreier JD, McGaughey GB ကို, Bogusky MJ, ကော့ CD ကို, et al ။ conformationally ကျပ်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ပေါင်းစပ် N ကို, N ကိုအစွမ်းထက် orexin အဲဒီ receptor ရန်အဖြစ် 1,4-diazepanes -disubstituted ။ Bioorg Med Chem လက်တ။ 2010; 20: 2311-15 ။ [PubMed]
120 ။ Bergman JM, Roecker AJ, မာ SP, Bednar RA, Reiss DR, et al ။ အစွမ်းထက် dual-orexin အဲဒီ receptor ရန်အဖြစ် Proline bis-ကြားတွင်။ Bioorg Med Chem လက်တ။ 2008; 18: 1425-30 ။ [PubMed]
121 ။ Winrow CJ, Tanis KQ, Reiss DR, Rigby လေး, Uslaner JM, et al ။ Orexin အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းလှုံ့ဆော်ထိတွေ့မှုကနေရရှိလာတဲ့မှတ်တမ်းနှင့်အမူအကျင့် plasticity ကာကွယ်ပေးသည်။ Neuropharmacology ။ 2010; 58: 185-94 ။ [PubMed]
122 ။ Whitman DB, ကော့ CD ကို, Breslin MJ, Brashear KM, Schreier JD, et al ။ တစ်ဦးအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးအစွမ်းထက်, CNS-ထိုးဖောက်မှု orexin အဲဒီ receptor ရန်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု N ကို, N ကို-disubstituted-1,4-diazepane ကြွက်များတွင်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းငြမ်း။ ChemMedChem ။ 2009; 4: 1069-74 ။ [PubMed]
123 ။ et al Coleman P ကို, ကော့ကို C, Breslin M က, Schreier J ကို, Roecker တစ်ဦး။ MK-4305 ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု: အိပ်မပျော်၏ကုသမှုများအတွက်ဝတ္ထု orexin အဲဒီ receptor ရန်။ 239th ACS Natl မှာပေးအပ်သည်။ တွေ့ဆုံ; မတ်လ 21-25; San Francisco က။ 2010 ။
124 ။ Malherbe P ကို, Borroni အီး, et al Gobbi L ကို, Knust H ကို, Nettekoven M က။ EMPA, နွားများအတွက်ဝတ္ထု High-ဆှဖှေဲ့, ရွေးချယ်ရန်၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့အမူအကျင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ2 အဲဒီ receptor ။ br J ကိုဖာ-macol ။ 2009; 156: 1326-41 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
125 ။ McAtee LC, Sutton SW, Rudolph DA, Li က X ကို, Aluisio LE, et al ။ အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် orexin အဲဒီ receptor4(နွားကို: ဝတ္ထု 1,3-phenyl-  dioxanes အစားထိုး2 R) ရန်။ Bioorg Med Chem လက်တ။ 2004; 14: 4225-29 ။ [PubMed]
126 ။ Hirose M က, Egashira S က, Goto Y ကို, Hashihayata T က, Ohtake N ကို, et al ။ N-acyl 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline: ပထမဦးဆုံး orexin-2 အဲဒီ receptor ရွေးချယ် Non-peptidic ရန်။ Bioorg Med Chem လက်တ။ 2003; 13: 4497-99 ။ [PubMed]
127 ။ Dingemanse J ကို, Dorffner, G, Hajak, G, ဂိ H ကို, Danker-Hopfe H ကို, et al ။ almorexant နှင့်အတူမူလတန်းအိပ်မပျော်လူနာအတွက်အထောက်အထား-of concept ကိုလေ့လာမှု (ACT-078573), dual-orexin အဲဒီ receptor ရန်။ WorldSleep07, 5th Int မှာပေးအပ်သည်။ Congr ။ ကမ္ဘာ့ဖလားဗဟိုဘဏ်။ Res အိပ်။ အိပ်စက်ခြင်း Med ။ Soc; စက်တင်ဘာ 2-6; ကဲရ်, Aust ။ 2007 ။
128 ။ GlaxoSmithKline ။ ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပိုက်လိုင်း။ 2010 ။ http://www.gsk.com/investors/product_pipeline/docs/GSK-product-pipeline-Feb-2010.pdf.
129 ။ Scammell TE, ဝီလီ JT, Guilleminault ကို C, Siegel JM ။ narcolepsy ၏ mouse ကိုမော်ဒယ်များအတွက် cataplexy ၏တစ်ဦးကသဘောတူချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်။ အိပ်သင့်ပါတယ်။ 2009; 32: 111-16 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
130 ။ ဘိလိယက်အမ် REM အိပ်စက်ခြင်းအပြုအမူရောဂါနှင့် narcolepsy ။ CNS Neurol disorders မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်။ 2009; 8: 264-70 ။ [PubMed]
131 ။ Dauvilliers Y ကို, Paquereau J ကို, Bastuji H ကို, Drouot X ကို, Weil JS, Viot-Blanc V. စိတ်ဓာတ်ကျန်းမာရေးအလယ်ပိုင်း hypersomnias အတွက်: ပြင်သစ်သဟဇာတလေ့လာမှု။ J ကို Neurol Neurosurg စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 80: 636-41 ။ [PubMed]
132 ။ Deng BS, Nakamura တစ်ဦးက, Zhang ကဒဗလျူ, Yanagisawa က M, ဖူကူ Y ကို, hypercapnic chemoreflex အတွက် orexin ၏ Kuwaki တီအလှူငှပေး: ကြွက်များတွင်မျိုးဗီဇနှင့် pharmacological နှောင့်အယှက်များနှင့်ဖြည့်စွက်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား။ J ကို Apple က Physiol ။ 2007; 103: 1772-79 ။ [PubMed]
133 ။ Dias ကို MB လီတစ်ဦးက, Nattie EE ။ အဆိုပါ retrotrapezoid နျူကလိယအတွက် orexin အဲဒီ receptor-1 ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းနိုးနိုးကွားကွားထဲမှာအများစု hypercapnia ဖို့ ventilatory တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ J ကို Physiol ။ 2009; 587: 2059-67 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
134 ။ Brisbare-Roche က C, Feletti L ကို, Koberstein R ကို, Nayler အို Jenck အက်ဖ်ယာယီ orexin အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ကြွက်များတွင် cataplexy မရှိဘဲအိပ်ပျော်ခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ WorldSleep07, 5th Int မှာပေးအပ်သည်။ Congr ။ ကမ္ဘာ့ဖလားဗဟိုဘဏ်။ Res အိပ်။ အိပ်စက်ခြင်း Med ။ Soc; စက်တင်ဘာ 2-6; ကဲရ်, Aust ။ 2007 ။
135 ။ Hoever P ကို, က de Haas က S, Chiossi အီး, ဗန် Gerven J ကို, Dingemanse ဂျေအကွိမျမြားစှာ-ထိုး pharmacokinetics, pharmacodynamics, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက် orexin အဲဒီ receptor ရန် almorexant ၏သည်းခံစိတ်။ အိပျပျြော 2008, 22nd Annu မှာပေးအပ်သည်။ တွေ့ဆုံ။ Assoc ။ ပါမောက္ခအိပ်စက်ခြင်း Soc; ဇွန်လ 7-12; Baltimore, Md ။ 2008 ။
136 ။ Fronczek R ကို, Overeem S က, Lee က SY, Hegeman ထားတဲ့ IM, ဗန်ရေ J ကို, et al ။ Hypocretin ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် (orexin) အရှုံး။ ဦးနှောက်။ 2007; 130: 1577-85 ။ [PubMed]
137 ။ Thannickal TC, လိုင် YY, Siegel JM ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Hypocretin (orexin) ဆဲလ်အရှုံး။ ဦးနှောက်။ 2007; 130: 1586-95 ။ [PubMed]
138 ။ Baumann CR, Bassetti CL, Valko စာတိုက်, Haybaeck J ကို, Keller က M, et al ။ hypocretin ဆုံးရှုံးမှု (orexin) စိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာနှင့်အတူ neurons ။ အမ်း Neurol ။ 2009; 66: 555-59 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
139 ။ Tafti အမ်နတ် Med '' ကြွက်, ခွေးနှင့်လူသားအတွက် orexin system ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်အိပ်ပျော်ရာမြှင့်တင်ရေး 'ဖို့ Reply ။ 2007; 13: 525-26 ။ [PubMed]
140 ။ Krauchi K ကို Cajochen ကို C, Werth အီး, Wirz-တရားမျှတရေးအေပူနွေးခွကေိုအိပ်ပျော်ရာလျင်မြန်စွာစတင်ခြင်းမြှင့်တင်ရန်။ သဘာဝ။ 1999; 401: 36-37 ။ [PubMed]
141 ။ Glass ကိုဂျေ, Lanctot KL, Herrmann N ကို, Sproule BA, Busto UE ။ အိပ်မပျော်နှင့်အတူသက်ကြီးရွယ်အိုအတွက်သက်သာစေသောဆေးညှို့: အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များ Meta-analysis သည်။ BMJ ။ 2005; 331: 1169 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
142 ။ Borgland SL, Chang SJ, Bower က MS, et al Thompson က JL, Vittoz N ကို။ Orexin A / hypocretin-1 ရွေးချယ်အပြုသဘောစစ်ကူများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအားပေးအားမြှောက်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 11215-25 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
143 ။ Sharf R ကို, Sarhan M က, Dileone RJ ။ Orexin မိုးရွာသွန်းမှုမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး mediates နှင့်နျူကလိယ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ activation shell ကို accumbens ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 64: 175-83 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
144 ။ Georgescu: D, Zachary V ကို, Barrot M က, Mieda M က, ဝီလီ JT, et al ။ မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic peptide orexin ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 3106-11 ။ [PubMed]
145 ။ Smith က RJ, Tahsili-Fahadan P ကို, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Orexin / hypocretin အခြေအနေတွင်မောင်းနှင်ကင်း-ရှာဘို့လိုအပ်ပေသည်။ Neuropharmacology ။ 2010; 58: 179-84 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
146 ။ Nair စင်ကာပူဒေါ်လာ, ရွှေလုပ် SA, High-အဆီအစားအစာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကြွက်များအတွက်ရှာကြံအစားအစာ reinstatement အပေါ် hypocretin 1 အဲဒီ receptor ရန် SB 334867 ၏ Shaham Y. Differential ဆိုးကျိုးများ။ br J ကို Pharmacol ။ 2008; 154: 406-16 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
147 ။ ဟေး AC အ, ချပ်မန်း H ကို, တေလာကို C, Moore က GBT, Cawthorne MA, et al ။ Anorectic အတွက်တစ်ဦးရွေးချယ် orexin-1 အဲဒီ receptor ရန်၏ thermogenic နဲ့ anti-အဝလွန်ခြင်းလှုပ်ရှားမှု ob / ob ကြွက်။ စည်းမျဉ်း Pept ။ 2002; 104: 153-59 ။ [PubMed]
148 ။ Ishii Y ကို, ဒဲလ် je, Halford JCG, Upton N ကို, Porter R ကို, et al ။ orexin-24 အဲဒီ receptor ရန် SB-1 နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောဆေးထိုးကုသမှုကိုအောက်ပါအထီးကြွက် 334867 ဇအတွက် Anorexia နှင့်အလေးချိန်အရှုံး။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2005; 157: 331-41 ။ [PubMed]
149 ။ Huang က ZL, Qu WM, Li က WD, Mochizuki T က, Eguchi N ကို, et al ။ orexin တစ်ဦး၏ arousal အကျိုးသက်ရောက်မှု histaminergic စနစ်၏ activation ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2001; 98: 9965-70 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
150 ။ Schulz H ကို, Brandenberger, G, Gudewill S က, Hasse: D, E ကိုနမ်း et al ။ plasma renin လှုပ်ရှားမှုနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ် bedrest အောက်မှာ narcoleptic လူနာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ၏အိပ်စက်ခြင်း-ပါတီအားဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ အိပ်သင့်ပါတယ်။ 1992; 15: 423-29 ။ [PubMed]